FM အသံလွှင့်စက်များ - FMUSER
ဤစီးရီးတွင် FMUSER ထုတ်လွှင့်မှုဖန်တီးမှုများ၏ ပင်မစီးရီးများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် တတ်နိုင်သော တတ်နိုင်သော FM အသံလွှင့်စက် ဒါဇင်များစွာပါရှိသည်။ drive-in ဘုရားကျောင်းနှင့် drive-in ပြဇာတ်ရုံ၊ ကော်ပိုရိတ်နှင့်အဖွဲ့များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေဂျင်စီများ၊ ဆေးရုံများ၊ အားကစားလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသားကုမ္ပဏီများနှင့် လူထုရေဒီယိုစခန်းများတွင် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
FMUSER သည် အဆိုပါအထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူများ ထောင်ပေါင်းများစွာသော စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို အသံလွှင့်ဖြေရှင်းချက်များဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ တစ်ဦးချင်းနှင့် စီးပွားဖြစ် ရေဒီယိုလိုင်းများအတွက် အောင်မြင်စွာ ဖန်တီးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကီလိုဝပ်အဆင့်မြင့်သော ပါဝါမြင့်စိုင်ပြည်နယ် FM အသံလွှင့်စက် (AKA:Cabinet FM transmitter) မှ ပါဝါအဆင့်အနည်းငယ်ရှိသော FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်စက်အထိ rack-mount FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်များအထိ ကျွမ်းကျင်သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ FM ရေဒီယိုစတူဒီယိုအတွက် ပက်ကေ့ခ်ျအပြည့်အစုံကို - အသံပရိုဆက်ဆာများ၊ စတူဒီယိုစားပွဲမှ စတူဒီယိုဇယားမှ စတူဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများအတွက် STL အင်တင်နာ၊ STL အသံလွှင့်စက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ STL အသံလွှင့်စက်များပါ၀င်သော FM ရေဒီယိုလိုင်းအတွက် စတူဒီယိုအသံလွှင့်စက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ FM အသံလွှင့် Antennas ပက်ကေ့ဂျ်များ — စက်ဝိုင်းပုံဝင်ရိုးစွန်းအင်တာနာ၊ မြေပြင်လေယဉ်အင်တင်နာ၊ FM dipole အင်တင်နာ၊ ကားရေဒီယိုအတွက် FM အင်တင်နာ၊ ပါဝါမြင့်မားသော FM transmitter အတွက် multi-bay FM အင်တင်နာ (3 bays၊4bays၊6bays၊ နှင့် 8 bays တို့သည် ရွေးချယ်နိုင်သည် ) RF အင်တင်နာ ဖိဒ်လိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အပါအဝင်။
အဘယ်ကြောင့် FMUSER FM ရေဒီယို Transmitters များ?
စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော Hardware ဒီဇိုင်း - အသံပြသခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းတွင် ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးမှလွဲ၍ အကောင်းဆုံးအရောင်းရဆုံးအချက်များထဲမှ တစ်ခုအနေဖြင့်၊ သို့သော် FMUSER FM ထုတ်လွှင့်မှုထုတ်လွှင့်ခြင်း၏ ဟာ့ဒ်ဝဲဒီဇိုင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ယူဆောင်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်- အဆင့်5ပါဝါဖြင့် နည်းပညာမြင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ချဲ့ထွင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်သည် အထွက်စတီရီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို သေချာစေသည်။ ထို့အပြင်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်အတွက် ကျစ်လစ်သောဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် အလူမီနီယံအလွိုင်းလုပ်ခွံ၊ တပ်ဆင်ထားသော လေအေးပေးစနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သုညနှင့်နီးစပ်သော ကြိမ်နှုန်းပျံ့လွင့်မှုရှိသော ကြိမ်နှုန်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သော အလိုလိုသိမြင်နိုင်သော LCD panel သည် ဝယ်ယူသူများအတွက် ကောင်းမွန်သော ထုတ်လွှင့်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆိုလိုပါသည်။
ရွေးချယ်နိုင်သော ပါဝါနှင့် ကြိမ်နှုန်းများ - ရောင်းချရန် FMUSER မှ ထုတ်လွှင့်သော FM transmitter ပါဝါကို အနည်းဆုံး 0.1W မှ 1000W နှင့်အထက် နှင့် အမြင့်ဆုံးတွင် 10kW + အထိ တွေ့နိုင်သည်။ ပါဝါမြင့်မားလေ၊ ထုတ်လွှင့်မှုပိုကျယ်လေ၊ ဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါ တန်ဖိုးနည်း FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်များသည် ဥပမာအားဖြင့် 30 watts FM transmitter တစ်ခုအတွက် 1000km ထက်ပိုသော အချင်းဝက်ကို လွှမ်းခြုံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်၊ FMUSER သည် စွမ်းအားမြင့် FM အသံလွှင့်စက်သည် ကြီးမားသော FM ရေဒီယိုလိုင်းများအတွက် အမြဲတမ်း ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း၏ အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောစကေးအမျိုးမျိုးရှိသော FM ရုပ်သံလွှင့်ဌာနများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် 2kW မှ 10kW မှ မတူညီသောပါဝါအမျိုးမျိုးဖြင့် ပါဝါမြင့် FM အသံလွှင့်စက်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ FMUSER FM အသံလွှင့်စက်များသည် တာရှည်ခံပြီး FM ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အသံအရည်အသွေးကို ထိထိရောက်ရောက် အာမခံနိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ - ကျွန်ုပ်တို့၏ FM အသံလွှင့်စက်စက်ရုံကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသော ဘတ်ဂျက်ဝယ်ယူသူများအတွက် ခိုင်မာသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် FM အသံလွှင့်စက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ရေဒီယိုအင်ဂျင်နီယာအခန်းရှိ အမျိုးမျိုးသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးကျိုးများကို ရှောင်ရှားရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းကို သေချာစေရန် အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်၊ သံမဏိ၊ ဖန်နှင့် ဆေးသုတ်ခြင်းတို့ကို အသုံးပြုထားသည်။ ထိရောက်မှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှု။
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး အရည်အသွေးမြင့်သည်။ - ၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ဘတ်ဂျက်စျေးနှုန်းကြောင့် FMUSER FM အသံလွှင့်စက်စီးရီးကို FM ရေဒီယိုဝါသနာရှင်များ၊ ရေဒီယိုအင်ဂျင်နီယာများ၊ အခြားရေဒီယိုအသံလွှင့်အဖွဲ့များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များက နှစ်သက်ကြပြီး အချို့သော 1000 watt နှင့် 5000 watt FM transmitter များကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုကြသည်။ drive-in ပြဇာတ်ရုံ၊ drive-in church၊ drive-through nucleic acid detection tests၊ live events နှင့် အမျိုးမျိုးသော live sports commentary ကဲ့သို့သော application များ။
အမျိုးမျိုးသောလျှောက်လွှာ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက်ဖြစ်စေ FMUSER မှ အကြိုက်ဆုံး ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနပစ္စည်းများကို လက်ကားဝယ်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် လက်ကားဝယ်ယူနိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက်များ၊ စျေးနည်း FM အသံလွှင့်ဌာန၊ ပြီးပြည့်စုံသော FM transmitter ပက်ကေ့ခ်ျစသည်တို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
FMUSER FM အသံလွှင့်စက် စီးရီး
FM အသံလွှင့်စက်များ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် စုဆောင်းရရှိလာသော အတွေ့အကြုံကို တဖြည်းဖြည်း ကြွယ်ဝလာသောအခါတွင်၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သော RF အဖွဲ့ထံသို့ သင်၏ စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်များကို ပြသနိုင်ပါသည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုမှ တံဆိပ်တပ်လိုဂိုအထိ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးပါသည်။ သင်၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွေ့လျားနေသော အင်အား။
အကယ်၍ သင်သည် စီးပွားဖြစ် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန အော်ပရေတာတစ်ဦးဖြစ်ရန် သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုလျှင် သတင်းဆိုးမဖြစ်နိုင်ပါ။
FMUSER FU-1000D 2U 1KW FM အသံလွှင့်စက်အတွက် FM ရေဒီယိုစခန်း
ဈေးနှုန်း (USD) : 3099
FMUSER FU-1000C 1KW FM Transmitter ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော 1KW FM ရေဒီယိုစခန်း
ဈေးနှုန်း (USD) : 1840
FMUSER 100Watt FM Transmitter သည် FM ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာန FSN-100B
ဈေးနှုန်း (USD) : 869
FMUSER FSN-5000T 5000 Watt FM အသံလွှင့်စက် ရောင်းရန် အကောင်းဆုံး 5kW FM ရေဒီယိုစခန်း
ဈေးနှုန်း (USD) : 14,880
FMUSER FSN-2000T 2000 Watt FM Transmitter အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း 2kW FM ရေဒီယိုစခန်းရောင်းမည်
ဈေးနှုန်း (USD) : 5,380
FMUSER FSN-1500T 1500 Watt FM ရေဒီယို Transmitter ရောင်းရန် အကောင်းဆုံး 1.5kW FM ရေဒီယိုစခန်း
ဈေးနှုန်း (USD) : 3,769
FMUSER FSN-1000T 1kW FM Transmitter ရောင်းရန် အကောင်းဆုံး ရေဒီယို 1000 Watts FM Transmitter
ဈေးနှုန်း (USD) : 3,169
FMUSER FSN-600T 600 Watt FM အသံလွှင့်စက် 600 Watts ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော FM ရေဒီယိုလိုင်းကို ရောင်းချရန်
ဈေးနှုန်း (USD) : 2,269
FMUSER FSN-350T 350 Watt FM ရေဒီယို Transmitter ရောင်းရန် အကောင်းဆုံး 350W FM ရေဒီယိုစခန်း
ဈေးနှုန်း (USD) : 1,499
FMUSER FU618F Solid State 10KW FM Transmitter FM ရေဒီယိုစခန်းအတွက် စွမ်းအားမြင့် FM Transmitter
ဈေးနှုန်း (USD) : 38700
FMUSER FU-618F Solid State 5KW FM အသံလွှင့်စက် FM ရေဒီယိုစခန်းအတွက် စွမ်းအားမြင့် FM Transmitter
ဈေးနှုန်း (USD) : 26,000
FMUSER FU618F Solid State 3KW FM Transmitter FM ရေဒီယိုစခန်းအတွက် စွမ်းအားမြင့် FM Transmitter
ဈေးနှုန်း (USD) : 11,000
FMUSER FMT5.0-150H 150W FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်
ဈေးနှုန်း (USD) : 1029
ရိုးရှင်းသောပုံစံဒီဇိုင်းအယူအဆကိုလက်ခံသည့် 150W FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှု FMT5.0-150H ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း။ ၎င်းသည် 50W FM stereo transmitter exciter၊ power amplifier၊ output filter နှင့် switching power supply တို့ကို 1U မြင့်မားသော 19-လက်မ စံ case တွင် ပေါင်းစပ်ထားပြီး အစိတ်အပိုင်းများအကြား ချိတ်ဆက်ထားသော ကေဘယ်များကို လျှော့ချပေးကာ အခြား FM များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီး လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူပါသည်။ အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုများ။
FMUSER FMT5.0-50H 50W FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်
ဈေးနှုန်း (USD) : 605
FMT5.0-50H FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အလေးချိန်ပိုပေါ့ကာ ယခင်စီးရီးဗားရှင်းထက် လည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်။ FMT5.0-50H သည် ရိုးရှင်းသောပုံစံ ဒီဇိုင်းအယူအဆကို ကျင့်သုံးသည်။ ၎င်းသည် 50W FM stereo transmitter exciter၊ power amplifier, output filter နှင့် switching power supply တို့ကို 1U high 19-inch standard case တွင် ပေါင်းစပ်ထားပြီး အစိတ်အပိုင်းများအကြား ချိတ်ဆက်ထားသောကေဘယ်များကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် သေးငယ်သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေသည့် အကောင်းဆုံး အသံလွှင့်ရုံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ဒရိုက်-စတန့်ပြဇာတ် အသံလွှင့်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းအတွင်း ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ မောင်းသွင်းခြင်း စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ကျောင်းဝင်းအတွင်း အသံလွှင့်ခြင်း၊ ရပ်ရွာအသံလွှင့်ခြင်း၊ စက်မှုနှင့် မိုင်းတွင်း အသံလွှင့်ခြင်း၊ ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများ ထုတ်လွှင့်ခြင်းစသည့်၊ စသည်တို့
FMUSER FU-30/50B 50W FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်
ဈေးနှုန်း (USD) : 609
CZH-T501 50w FM transmitter သည် လက်ရှိ အသံလွှင့်ကိရိယာဈေးကွက်တွင် VSWR ကာကွယ်ရေး၊ အပူချိန်ကာကွယ်မှု၊ RDS ပေါက်၊ အီလက်ထရွန်နစ် အသံအတိုးအကျယ် ချိန်ညှိခြင်း နှင့် low pass filter နှစ်ခုလုံး တပ်ဆင်ထားသော တစ်ခုတည်းသော အလယ်အလတ် ပါဝါ FM ထုတ်လွှင့်မှု ထုတ်လွှင့်သည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။ အားကစားကွင်း၊ ခရိုင်ရေဒီယိုစခန်း၊ ရပ်ရွာရေဒီယိုစခန်း၊ မိုတယ်ထုတ်လွှင့်မှု၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်၊ ကားမောင်းသွင်းသည့် ဘုရားကျောင်းနှင့် ပြဇာတ်ရုံ အစရှိသည့် နေရာများစွာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
FMUSER FU-25A 25W FM ရေဒီယို အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်သူ
ဈေးနှုန်း (USD) : 240
FMUSER FU-25A (CZH-T251 ဟုလည်းလူသိများသည်) 25W FM အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုသည် 2021 ခုနှစ်တွင် အရောင်းရဆုံး ပါဝါနိမ့်သော FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် drive-in ကဲ့သို့သော အလယ်အလတ်တန်းစား အသံလွှင့်အသံလွှင့်ဌာနများတွင် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အများအားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည် - ဘုရားကျောင်းရုပ်သံလွှင့်ခြင်းနှင့် drive-in-ရုပ်ရှင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းစသည်တို့။
FMUSER FU-15A 15W FM ရေဒီယို အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်သူ
ဈေးနှုန်း (USD) : 168
FU-15A 15W FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုသည် အကောင်းဆုံး LPFM ထုတ်လွှင့်သည့် အသံလွှင့်ဌာနငယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ drive-in theater ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ drive-in church အသံလွှင့်ခြင်း၊ drive-through test broadcasting၊ campus broadcasting၊ community broadcasting၊ industrial သတ္တုတူးဖော်ရေး အသံလွှင့်ရုံ၊ ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခြင်း စသည်တို့၊
FMUSER FU-7C 7W FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်
ဈေးနှုန်း (USD) : 83
FMUSER FU-7C 7W FM အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုသည် FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အကောင်းဆုံး ပါဝါနိမ့်သော FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
FMUSER FU-05B 0.5W FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်
ဈေးနှုန်း (USD) : 70
FU-05B သည် FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများအတွက် အကောင်းဆုံး LPFM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုထုတ်လွှင့်ခြင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သေးငယ်သောအကွာအဝေးကို ကာမိရန်လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်နည်းသော အသံလွှင့်ကိရိယာဝယ်သူများအတွက်လည်း ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
FM Transmitter သည် မည်မျှအထိ ထုတ်လွှင့်နိုင်မည်နည်း။
အချို့သော ဖောက်သည်များသည် "ကျွန်ုပ်တို့အား ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနကို မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း။" သို့မဟုတ် "ကျွန်ုပ်၏ ပါဝါမြင့်မားသော FM transmitter အတွက် dipole အင်တင်နာကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။ 6-bay dipole အင်တင်နာ သို့မဟုတ် 8 bays?" အစရှိသည်တို့၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ၊ ၎င်းတို့သည် FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးကို ပိုမိုသိချင်ကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ RF အင်ဂျင်နီယာများထံ ဆက်စပ်မေးခွန်းများစွာကို မေးမြန်းခဲ့ကြပါသည်။ အောက်ပါအကြောင်းအရာသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ FM transmitter အကွာအဝေးနှင့် သက်ဆိုင်သော မျှဝေမှုတွင် မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများစာရင်း။ သင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်သည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ သင့်ပြဿနာများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါသည်။
1-watt ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်မှု မည်မျှအထိ ရှိနိုင်သနည်း။
1 watt FM transmitter သည် ဘယ်လောက်အထိ ရောက်နိုင်မလဲ။
5-watt FM transmitter သည် မည်မျှ ဝေးကွာမည်နည်း။
15w FM transmitter အကွာအဝေးကဘာလဲ။
15w FM အသံလွှင့်စက်သည် မည်မျှအထိ ထုတ်လွှင့်နိုင်မည်နည်း။
15W FM အသံလွှင့်စက်၏ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးမှာ အဘယ်နည်း
FM transmitter အကွာအဝေးဇယားကဘာလဲ။
100 watt FM transmitter သည် ဘယ်လောက်အထိ ရောက်နိုင်မလဲ။
5000 watt FM transmitter သည် ဘယ်လောက်အထိ ရောက်နိုင်မလဲ။
50000 watt FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနက ဘယ်လောက်အထိ ရောက်နိုင်မလဲ။
FM transmitter range/FM transmitter range calculator ကို ဘယ်လိုတွက်ချက်မလဲ။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုရဲ့ လွှမ်းခြုံမှုကို သိလိုတဲ့အခါ၊ “FM ထုတ်လွှင့်တဲ့ အသံလွှင့်စက်ရဲ့ လွှမ်းခြုံမှုအကွာအဝေးရဲ့ တိကျတဲ့ နံပါတ် (ပါဝါ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားမခွဲခြားဘဲ) သင့်မှာ ရှိမနေဘူးဆိုရင်၊ မင်းက ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ ရောက်နေတာ။" ဖောက်သည်တွေကို ဒါကို ရှင်းပြရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ RF ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ၊ transmitter ရဲ့ ထုတ်လွှင့်မှုလွှမ်းခြုံမှုကို ထိခိုက်စေတဲ့ အချက်တစ်ခုထက်မက ရှိနေတာကြောင့်ပါ။ ထိရောက်သော radial power (ERP) နှင့် ပျမ်းမျှ မြေပြင်အနေအထား (HAAT) အထက် အင်တင်နာဆိုဒ် အမြင့်နှင့် အခြားသော ကိန်းရှင်များစွာသည် ကျွန်ုပ်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သော အရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား အမှန်တကယ်အဖြေများဖြင့် ကျေနပ်စေရန်နှင့် လက်တွေ့ကျသောပြဿနာများကို ကူညီဖြေရှင်းနိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ RF အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အရောင်းအဖွဲ့သည် တိကျသောနံပါတ်အချို့ကို ပေးလေ့ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပါဝါနိမ့်သောထုတ်လွှင့်စက်များ၏လွှမ်းခြုံမှုအကြောင်းမေးသောဖောက်သည်များအတွက်၊ "15W FM transmitter သည် 3k㎡အထိဖုံးလွှမ်းနိုင်သော်လည်း 25W FM transmitter သည် 5k㎡အထိဖုံးလွှမ်းနိုင်သည်။ သင်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်းလိုပါက၊ 10k㎡ သို့မဟုတ် 20k㎡ ကဲ့သို့၊ သင်သည် 150W သို့မဟုတ် 350W FM ထုတ်လွှင့်မှု ထုတ်လွှင့်သည့် ပါဝါအား ပိုမိုကြီးမားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရွေးချယ်သင့်သည်"
သို့သော် အချို့သော ရေဒီယိုအသစ်လေးများအတွက်၊ ဤတိကျသောကိန်းဂဏန်းများသည် မလိုအပ်သောနားလည်မှုလွဲမှားမှုများဖြစ်စေနိုင်ပြီး FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှု၏လွှမ်းခြုံလွှမ်းခြုံမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်တွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာအချက်များအဖြစ်သို့တွန်းပို့နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာအဖြေများသည် ခက်ခက်ခဲခဲရခဲ့သော်လည်း၊ FM အသံလွှင့်စက်တစ်ခု၏ လွှမ်းခြုံမှု (၎င်းတို့ မည်မျှအထိသွားနိုင်သည်ကို ဆိုလိုသည်) ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် အောက်ပါအချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အကျဉ်းချုံးထားဆဲဖြစ်သည်။
1. အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်သူ အထွက်ပါဝါပမာဏ (TPO)၊
TPO သည် ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင် "Transmitter Power Output" မှအတိုကောက်ဖြစ်ပြီး "၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းရဆုံး 5kW FM transmitter" ဖြစ်သည်ဆိုပါက၊ ၎င်းသည် "5kW" မှထုတ်လုပ်သော transmitter မှထွက်ရှိသောပါဝါကိုရည်ညွှန်းပါသည်။ အမှန်တကယ် ထုတ်လွှတ်သည့် ပါဝါအစား ERP ပါဝါ (Effective Radiated Power) အဖြစ် အမြဲရှုမြင်သည်။ TOP သည် ကုန်ကျစရိတ်၊ ဝယ်ယူမှု၊ ဘတ်ဂျက်စသည်ဖြင့် နီးကပ်စွာ ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် အဓိကအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စံပြလွှမ်းခြုံမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် FM အသံလွှင့်စက်နှင့် FM ရေဒီယို အင်တာနာများကဲ့သို့သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ကိရိယာအချို့အတွက် မြင့်မားသောဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းဖြင့် ရောက်ရှိလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ TOP သည် အင်တင်နာရရှိမှုနှင့်အတူ၊ အထူးသဖြင့် မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် သင့်ဘတ်ဂျက်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကို ဆုံးဖြတ်သောအခါတွင် အထူးသဖြင့် ရေဒီယိုစခန်းတည်ဆောက်မှုအစောပိုင်းကာလတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။
2. ပျမ်းမျှမြေပြင်အနေအထား (HAAT) ထက် မြင့်သော Antenna
ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတွင်၊ HAAT သို့မဟုတ် EHAAT (ထိရောက်သော HAAT) သို့မဟုတ် ပျမ်းမျှမြေပြင်အနေအထားအထက် အမြင့်သည် အမှန်တကယ်ထုတ်လွှင့်သည့်နေရာတစ်ခုကြားရှိ ဒေါင်လိုက်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောအကွာအဝေးကို ရည်ညွှန်းသည်(ထုတ်လွှင့်သူနှင့်အင်တင်နာပါ၀င်သည်) နှင့် ကီလိုမီတာအနည်းငယ်ကြားရှိ ပျမ်းမျှမြေပြင်အမြင့်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ HAAT ၏ အဓိကအချက်များကို ဘုံနားလည်သဘောပေါက်ရန်၊ HAAT သည် အခြေခံအားဖြင့် အသံလွှင့်အင်တင်နာ၏ လွှမ်းခြုံမှုဖြစ်ကြောင်း သိထားရန်လိုသည်၊ ၎င်းသည် အင်တင်နာဆိုက်တစ်ခု၏ ဒေါင်လိုက်အနေအထားသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းအထက်တွင်ရှိသည်။ သင်သည် အင်တင်နာ၏ တပ်ဆင်သည့်နေရာနှင့် လွှင့်တင်သည့်နေရာတစ်ခုတွင် ရပ်နေသည်ဆိုပါစို့၊ ဤအချိန်တွင် သင်နှင့် ထုတ်လွှင့်သည့်နေရာသည် လွင်ပြင်တစ်ခုပေါ်တွင် ရှိနေသည်၊ ထို့နောက် အင်တင်နာသည် ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် ကီလိုမီတာဆယ်ဂဏန်းအကွာအဝေးသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ သင့်အနေအထားသည် လွင်ပြင်မဟုတ်သော်လည်း တောင်ကုန်းများဖြစ်နေပါက၊ ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးသည် ကီလိုမီတာများစွာသာ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ HAAT ကို နိုင်ငံတကာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် မီတာဖြင့် တရားဝင် တိုင်းတာပြီး ဖက်ဒရယ် ဆက်သွယ်ရေး ကော်မရှင် (FCC) ကဲ့သို့သော ဒေသဆိုင်ရာ ရေဒီယို အဖွဲ့အစည်းများမှ အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
Transmitter၊ Receiver၊ Antenna နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အဆင်သင့်ဖြစ်သောအခါတွင် အမြင့်ဆုံးလွှမ်းခြုံမှုကို ရယူလိုပါက၊ Fresnel ဧရိယာတွင် အနည်းဆုံး 60% ရှင်းလင်းမှုရရှိရန် အင်တာနာကို တတ်နိုင်သမျှ မြင့်အောင်ထားရန် အမြဲမမေ့ပါနှင့်။ နှင့် အစစ်အမှန် RF မျဉ်းကြောင်း (LOS) ကို ရယူပါ၊ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အလွန်ထူထပ်သော သစ်ပင်များနှင့် မြင့်မားသော အဆောက်အဦများ စသည်တို့ကဲ့သို့ RF အကွာအဝေးကို ချဲ့ထွင်ခြင်းမှ ရပ်တန့်ရန် အနုတ်လက္ခဏာအချက်များကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးပါသည်။
1) အင်တင်နာ နိမ့်ခြင်းကြောင့် RF ကေဘယ်လ် ဆုံးရှုံးမှုသည် သေးငယ်သွားပြီး အင်တင်နာသည် ယခုအချိန်တွင် ပိုကောင်းသော အခြေအနေတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် အင်တင်နာ အမြင့်နှင့် RF ကြိုးများ၏ အရေအတွက်အကြား အပေးအယူကို စဉ်းစားပါ။
2) ဟာ့ဒ်ဝဲ အသံလွှင့်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ ပြစ်ဒဏ်များကို တားဆီးရန် အင်တင်နာအမြင့်အတွက် ဒေသဆိုင်ရာ ရေဒီယို စီမံခန့်ခွဲရေး၏ စည်းမျဉ်းများကို ဂရုပြုပါ (အချို့နေရာများတွင် မသင့်လျော်သော အင်တာနာ အမြင့်အတွက် ပြစ်ဒဏ်များမှာ အလွန်လေးလံသည်)။
Fresnel Zone အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ
သိကောင်းစရာများ Radio Frequency ရှိ Fresnel Zone ၏ အဓိပ္ပါယ်
ဘယ်လိုထုတ်ပေးလဲ။ transmitter နှင့် receiver သည် မြင်ကွင်းမျဉ်းတွင် ရှိနေသည်။
၎င်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည် ရေဒီယိုလှိုင်း
ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုသလဲ Fresnel ဒေသသည် ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လက်ခံအင်တင်နာများကြားတွင်ရှိပြီး ဖြောင့်သောလမ်းကြောင်းနှင့် ရေဒီယိုလှိုင်း၏ကွဲသွားသောလမ်းကြောင်းကြား ခရီးကွာဟချက်မှာ n λ/2 သည် အလင်းဝင်ပေါက်နှင့် လက်ခံအင်တာနာ၏ အနေအထားပါရှိသော ellipsoid တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝင်ရိုးအဖြစ်လမ်းကြောင်း။ ellipse ၏အရွယ်အစားကို လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းနှင့် ဘူတာနှစ်ခုကြားရှိ အကွာအဝေးဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင်၊ စနစ်တစ်ခုလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများကိုသေချာစေရန် အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ ထုတ်လွှင့်သည့်ဆိုက်နှစ်ခုစလုံးရှိ မတူညီသောအင်တင်နာများကြားတွင် ထင်ရှားသော elliptical passing area ကိုထားရှိရန်၊ အကန့်အသတ်မရှိ၊ ရပ်တန့်ခြင်းမရှိ၊ အတားအဆီးမရှိစေရန်၊ လုပ်ငန်းစဉ်။
ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ မြင်ကွင်းမျဉ်းအတွင်း အနှောင့်အယှက် သို့မဟုတ် အတားအဆီး (LOS) သည် အချက်ပြဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် point-to-point ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွင်၊ အတားအဆီးမရှိ ကြိုးမဲ့စနစ်နှစ်ခုကြားရှိ မြင်ကွင်းလမ်းကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
3. အင်တင်နာစနစ်တွင်အသုံးပြုသော အင်တာနာအမျိုးအစားများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အင်တင်နာနှင့် coaxial ကြိုးအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုသည်။ coaxial cable ကိုအသုံးပြုသောပမာဏ
4. တစ်ဖက်ရှိ FM လက်ခံကိရိယာ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်း
1. အင်တင်နာဆိုဒ်အနီးရှိ မြေပြင်အနေအထားရှိ လွတ်ခြင်းအဆင့် သစ်ပင်များ သို့မဟုတ် အဆောက်အဦများ ၏သိပ်သည်းဆနှင့် အမြင့်ကဲ့သို့သော အင်တင်နာနေရာအား ဝန်းရံထားသည့် ဝန်းရံခြင်း
2. အင်တင်နာနေရာအနီးရှိ မြေပြင်အနေအထား အမျိုးအစား မြေပြန့် သို့မဟုတ် တောင်ကုန်း
3. အနီးနားရှိ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနမှ တူညီသော ကြိမ်နှုန်းထုတ်လွှင့်မှုကြောင့် ရေဒီယိုလှိုင်းဝင်ရောက်မှု
အနီးနားရှိ ကြိမ်နှုန်းဘူတာများ သို့မဟုတ် တူညီသောကြိမ်နှုန်းဖြင့် ထုတ်လွှင့်နေသည့် အခြားရေဒီယိုလိုင်းများသည်၊ ဥပမာ၊ အင်တင်နာသည် ကီလိုမီတာ 20 အကွာအဝေးကို မြင်နိုင်သော်လည်း အခြားဘူတာတစ်ခုသည် တူညီသောကြိမ်နှုန်း 20 ကီလိုမီတာအကွာတွင် ရှိနေပါက၊ ၎င်းသည် အချက်ပြမှုကို ပိတ်ဆို့ခြင်း/အနှောင့်အယှက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အမှန်တရားမှာ- ထုတ်လွှင့်သည့် ထုတ်လွှင့်မှု ပါဝါ သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်များ ပါ၀င်သည်ဖြစ်စေ ထုတ်လွှင့်သည့် ထုတ်လွှင့်မှု၏ တိကျသော လွှမ်းခြုံမှုကို သင် ဘယ်သောအခါမှ မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ သင်သည် RF ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအချို့၏ ခန့်မှန်းလွှမ်းခြုံမှုကို အမြဲရရှိနိုင်သည် (ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကကဲ့သို့ပင်)။
ဤခန့်မှန်းကိန်းဂဏန်းများသည် ကောင်းမွန်သော ထုတ်လွှင့်မှုထုတ်လွှင့်သူအား ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားရန်နှင့် မလိုအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များ သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် သို့မဟုတ် FM transmitter ဝယ်ယူပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုခုတွင် ကောင်းမွန်စွာကိုးကားနိုင်စေရန် ဤခန့်မှန်းကိန်းဂဏန်းများသည် လက်တွေ့တွင် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကို အထောက်အကူပြုပါသည်။
အတွေ့အကြုံက အကောင်းဆုံးဆရာဆိုတာ ငါတို့အားလုံးသိတယ်။ FM အသံလွှင့်စက်ကို တပ်ဆင်ရန်နှင့် ၎င်းကို တိုက်ရိုက်လည်ပတ်ရန် FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်တစ်ခု၏ အတိကျဆုံး လွှမ်းခြုံမှုကို ရရှိရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဤနေရာ၌ FMUSER မှ အကြံပြုသည်မှာ သင်သည် မတူညီသော ကိန်းရှင်များကို အသုံးပြုရန်နှင့် စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်မှုများစွာကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့် သင်လုပ်နိုင်သည်-
1. အင်တင်နာအမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ပါ (4-bay သို့မဟုတ်2bays FM အင်တင်နာသည် ကောင်းမွန်သည်)
2. အင်တင်နာ၏ ကိုင်ဆောင်ထားသော အမြင့်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ (မီတာ 30 သည် အလွန်လုံလောက်သည်၊ 15 ထပ်အဆောက်အအုံနှင့် ညီမျှသည်)
3. ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှု၏ ပါဝါကို သတ်မှတ်ပါ (သင်သည်လည်း 200 Watts မှ 500 Watts သို့ပြောင်းနိုင်သည်၊ နှင့် အပြန်အလှန်အားဖြင့်)။
4. ပို့လွှတ်သည့်အချက်အဖြစ် မတူညီသောဆိုဒ်များကိုရှာပါ (သင်သည် ပြန့်ပြူးသော သို့မဟုတ် တောင်ကုန်းပေါ်ရှိနေရာ သို့မဟုတ် တောင်ပေါ်တွင် ညာဘက်တွင်ရှိမရှိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ)
5. ထုတ်လွှင့်သည့်နေရာမှ ရှင်းလင်းသော ရေဒီယိုအချက်ပြမှုများကို သင်လက်ခံနိုင်သည့် အဝေးဆုံးထုတ်လွှင့်သည့်အကွာအဝေးကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
6. ကိန်းရှင်များကိုပြောင်းလဲပြီး သင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အရာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့မှပေးထားသော transmitter လွှမ်းခြုံကိုးကားမှုဇယားတွင် သင်မလိုအပ်သောအရာတစ်ခုမျှမတွေ့ပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပထမအကြိမ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။ FMUSER သည် သင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်သူ၏ လွှမ်းခြုံမှုကို ခန့်မှန်းရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။
ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းများကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းနည်း | ရေဒီယိုဝန်ထမ်းအတွက် အဆုံးစွန်သော အကြံဉာဏ်များ l
ဒီစျေးကြီးတဲ့ အသံလွှင့်စက်တွေကို FM ရေဒီယိုလိုင်းမှာ ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနမာစတာအတွက်၊ စက်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုရှိပါက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် ထပ်မံပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ကျန်းမာသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထိန်းထားရန်နှင့် သင့်ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေရန်အတွက်၊ ထုတ်လွှင့်သည့်ဌာနအတွက် အပတ်စဉ်၊ သုံးလတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်စဉ်တွင် အဆိုပါကိရိယာများကို ထိန်းသိမ်း/စစ်ဆေးခြင်း ရှိရပါမည်။
အခြေခံစက်ကိရိယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် စံနှုန်းများကဲ့သို့သော လက်တွေ့ကျသော ရည်ညွှန်းအချက်အလက်များကို စာရင်းပြုစုခြင်းဖြင့်၊ ဤမျှဝေမှုသည် FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အကျယ်တဝင့် အသုံးဝင်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွေ့အကြုံနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
ဤမျှဝေမှုသည် စက်ပစ္စည်းအိုမင်းမှုနှင့် မလျော်ကန်သောလည်ပတ်မှုစသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရုပ်သံလွှင့်စက်များ ပျက်စီးမှုမှန်သမျှကို တားဆီးရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အချို့သော ရုပ်သံလွှင့်ဌာနများ မတည်ထောင်မီနှင့် အပြီးတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအမံများကို ရည်ညွှန်းချက်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အမှားအယွင်းရောဂါရှာဖွေရေး ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် စခန်းမှူးက
ထုတ်လွှင့်သည့်ဆိုက်တစ်ခုစီတွင် မတူညီသော RF ထုတ်လွှင့်မှုကိရိယာများကြောင့်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများကို လက်တွေ့အခြေအနေများနှင့် ချိန်ညှိရန် လိုအပ်နိုင်ပြီး ဤမျှဝေမှုသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ကြောင်း သိပါ။
FM ရေဒီယိုစခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည် မလွယ်ကူပါ။
LPFM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအများစုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအများစုတွင် တည်ဆောက်မှု၏ ကနဦးအဆင့်တွင် လုံလောက်သော start-up ဘတ်ဂျက်များကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဘူတာရုံပိုင်ရှင်သည် ဤဘတ်ဂျက်များဖြင့် လိုအပ်သော အသံသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းအချို့ကို ဝယ်ယူနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် အခြေခံထုတ်လွှင့်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသေးပါ။
အများစုမှာ Cost ကြောင့်ဖြစ်သည်။
BSW ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာကျော် ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ ပေးသွင်းသူသည် စက်ပစ္စည်းများကို ထူးထူးခြားခြား အသံလွှင့်အရည်အသွေးဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း စျေးနှုန်းသည် ဘတ်ဂျက်ဝယ်သူအတွက် အလွန်အဆင်မပြေဘဲ၊ ၎င်းသည် ဌာနတွင်းလည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန် ၎င်းတို့၏ အာရုံစိုက်မှုကို မောင်းနှင်သည့် ဘူတာများစွာသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးသည် (ဥပမာ၊ အသုံးအဆောင်များနှင့် အလုပ်သမားစရိတ်များ) နှင့် ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုကုန်ကျစရိတ်များ (ယေဘုယျအားဖြင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ) စက်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ထက်။
သို့သော်လည်း ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်သည် လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ၏ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ စတင်တည်ထောင်ရန် ရန်ပုံငွေများ လိုအပ်သောအခါ၊ ဤရေဒီယိုဌာနများသည် အခြေခံ LPFM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခု စတင်ရန်အတွက် အလှူငွေများနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ (ယေဘုယျအားဖြင့် စပွန်ဆာများ) ကို ရှာဖွေလေ့ရှိသည်။
အဆိုပါရှည်လျားသောလက်စွဲစာအုပ်များကိုဖတ်ရန် အလွန်အလုပ်ရှုပ်နေပါက သို့မဟုတ် သော့ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များသာလိုအပ်ပါက၊ အောက်ပါရေဒီယိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနှစ်ချုပ်နှင့် အကြံပြုချက်များကို လျင်မြန်စွာကြည့်ရှုရန် မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှ မဆိုးနိုင်ပါ။
စက်ကိရိယာအား လုံး၀ ဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန်နှင့် အနာဂတ် ရည်ညွှန်းချက်အတွက် လည်ပတ်မှု ညွှန်ကြားချက်များကို တစ်ပြေးညီ သိမ်းဆည်းနိုင်စေရန် သေချာစေရန် လည်ပတ်မှု ညွှန်ကြားချက်များကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ပါ။
စက်ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်မွမ်းမံရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပါ သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအင်ဂျင်နီယာထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပါ သို့မဟုတ် ဘူတာရုံစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
သင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်ကိရိယာသည် အောက်ပါအခြေအနေများနှင့် ကြုံတွေ့ရပါက ပလပ်ကိုဆွဲထုတ်ပါ သို့မဟုတ် ပင်မလျှပ်စစ်ခလုတ်ကို ကြိုတင်ပိတ်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းများထံ အချိန်မီဆက်သွယ်ပါ။
စက်ပစ္စည်းသည် မတူညီသော ဆူညံသံများ ထွက်ပေါ်လာခြင်း သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော ညွှန်ကြားချက်အလင်းရောင် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်များ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာ အခြေအနေနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါက၊
စက်ပစ္စည်းသည် ကျဆင်းခြင်း၊ စိုစွတ်ခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေတစ်ခုခုတွင် ပျက်စီးသွားပါက၊
စက်ပစ္စည်း ပြုတ်ကျပါက သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားပါက၊
စက်ပစ္စည်းသည် သိသာထင်ရှားသော စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲမှုများကို ပြသပါက၊
စက်ပစ္စည်းသည် မိုးရေ သို့မဟုတ် ရေနှင့်ထိတွေ့ပါက၊
ပါဝါထောက်ပံ့မှု - မည်သည့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမဆို (ရုပ်သံလွှင့်ကိရိယာ အမျိုးအစားများအပါအဝင်) ကိုမ၀ယ်မီ ၎င်း၏ဗို့အား၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုအမျိုးအစားနှင့် "လျှပ်စစ်ဓာတ်အား" နှင့်ပတ်သက်သည့် အခြားကန့်သတ်ချက်အချက်အလက်ကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ပါစေ။ အခြားနိုင်ငံများမှ ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းရောင်းချသူအချို့ကို သင်ဝယ်ယူသောအခါ မတူညီသောထုတ်ကုန်များသည် မတူညီသောနိုင်ငံများတွင် မတူညီသော ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုစနစ်များကိုအသုံးပြုသောကြောင့် မတူညီသော ထုတ်ကုန်များသည် မတူညီသောဗို့အားများ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် မတူညီသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုများနှင့် ပါဝါပေါက်ပေါက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် (FM transmitter တစ်ခု၏ နောက်ကျောတွင် 220V ကဲ့သို့သော စကားလုံးအချို့ကို မကြာခဏတွေ့မြင်နိုင်သည်)။
အချိန်မီ မခွဲခြားနိုင်လျှင် သို့မဟုတ် မှာယူပြီးနောက် မည်ကဲ့သို့ ခွဲခြားရမည်ကို မသိပါက၊ ကုန်ပစ္စည်း အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူထံ ဆက်သွယ်ခြင်းက ပိုကောင်းပါသည်။ အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုဆက်သွယ်ရေးတွင် သင်အစပြုကြောင်းသေချာစေရန် ထုတ်ကုန်လက်စွဲရှိ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ပါဝါကြိုးကာကွယ်ခြင်း - ပါဝါကြိုးအား ကြိုးပေါ်တွင် တင်ထားသော အရာဝတ္ထုများ နင်းမိခြင်း သို့မဟုတ် ချိတ်မိခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန်အတွက် ပါဝါကြိုးအား ဖြတ်သန်းသွားရမည်။ ပလပ်များနှင့် အဆင်ပြေသော ပလပ်ပေါက်များရှိ ဝါယာကြိုးများနှင့် စက်မှထွက်ရန် ၎င်းတို့၏ အနေအထားများကို အထူးဂရုပြုပါ။
ဓာတ်အားလိုင်းများ – ပြင်ပအင်တင်နာစနစ်သည် အထက်ပါဝါလိုင်းများ သို့မဟုတ် အခြားမီးများ သို့မဟုတ် ပါဝါဆားကစ်များအနီး သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့ ဓာတ်အားလိုင်းများ သို့မဟုတ် ဆားကစ်များအတွင်းသို့ ပြုတ်ကျနိုင်သည့်နေရာတွင် မထားရပါ။ ပြင်ပအင်တင်နာစနစ်ကို တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ ၎င်းတို့ကို ထိမိခြင်းကြောင့် သင့်သေဆုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် အဆိုပါ ဓာတ်အားလိုင်းများ သို့မဟုတ် ဆားကစ်များကို မထိမိစေရန် အထူးဂရုစိုက်ပါ။
ဝန်ပိုခြင်း – မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် နံရံခြေစွပ်များ သို့မဟုတ် တိုးချဲ့ကြိုးများကို ဝန်ပိုမချပါနှင့်။
ပြင်ပအင်တင်နာကို မြေစိုက်ခြင်း – ပြင်ပအင်တင်နာ သို့မဟုတ် ကေဘယ်စနစ်သည် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပါက၊ ဗို့အားမြင့်တက်မှုနှင့် တည်ငြိမ်အားဖြည့်မှုအချို့ကို အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် အင်တာနာ သို့မဟုတ် ကေဘယ်စနစ်အား မြေစိုက်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
သန့်ရှင်းရေး - aerosol ကဲ့သို့သော အပိုအရည်များ သို့မဟုတ် သန့်စင်ဆေးများသည် စက်ကို သန့်ရှင်းရေးအတွက် မကောင်းသော်လည်း အနည်းငယ်စိုစွတ်သော နူးညံ့သော သန့်ရှင်းရေးအဝတ်သည် အသံပိုကောင်းကြောင်း အမြဲသတိရပါ။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့် စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
စက်ပစ္စည်းများကို ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ပါ။ ကြမ်းတမ်းစွာ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ အမြန်ရပ်တန့်ခြင်း၊ အင်အားအလွန်အကျွံ ရွေ့လျားခြင်းနှင့် မညီညာသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ရွေ့လျားခြင်းသည် စက်ပစ္စည်းများ ပြုတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
လေဝင်လေထွက် - အပူလွန်ကဲမှုမဖြစ်စေရန် ရေဒီယိုပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်သောလေဖြတ်သည့်နေရာကို အမြဲချန်ထားခဲ့ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်ဘူတာရုံကိရိယာများကို သေးငယ်ပြီး ပိတ်ဆို့နေသောနေရာအချို့တွင် မထားခဲ့ပါနှင့်၊ အချို့သောမာကျောသောမျက်နှာပြင်များရှေ့တွင် ၎င်းတို့ကို အနီးကပ်ထားမည့်အစား အဆိုပါလေဝင်ပေါက်များကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ထားလိုက်ပါ။ နံရံ သို့မဟုတ် အိပ်ရာအဖြစ်။ ထို့အပြင် သိထားရန် လိုအပ်သည်- သင်သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်မှသာ စက်ကိရိယာအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ပါ သို့မဟုတ် မသင့်လျော်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် စက်ပစ္စည်းများ အလွယ်တကူ ပျက်သွားနိုင်သည်။
အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ - အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်သည့်အခါ၊ ဝန်ဆောင်မှုပညာရှင်မှ ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် မူလအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့ တူညီသောလက္ခဏာရပ်များကို အသုံးပြုကြောင်း သေချာပါစေ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အစားထိုးခြင်းသည် မီး၊ လျှပ်စစ်ရှော့တိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်များကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ရေနှင့် အစိုဓာတ် - ရေနှင့်နီးသော ကိရိယာများကို အသုံးမပြုပါနှင့် - ဥပမာ၊ ရေချိုးကန်၊ ရေဆေးကန်၊ မီးဖိုချောင်သုံး ဇလုံ သို့မဟုတ် အဝတ်လျှော်ဇလုံအနီး၊ စိုစွတ်သောမြေအောက်ခန်း၌; သို့မဟုတ် ရေကူးကန်နှင့် နီးသော သို့မဟုတ် အလားတူ စိုစွတ်သော သို့မဟုတ် စိုစွတ်သော နေရာတွင် ထားပါ။
တည်ငြိမ်မှု - မတည်မငြိမ်သော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် စက်ပစ္စည်းများကို မထားရှိပါနှင့်။ စက်ပစ္စည်းသည် ပြုတ်ကျနိုင်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အခြားသူများကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေကာ စက်ပစ္စည်းအား ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ပေးသွင်းသူမှ အကြံပြုထားသည့် ထိန်သိမ်း သို့မဟုတ် ကွင်းဆက်ပေါ်တွင် ရုပ်သံလွှင့်ကိရိယာအားလုံးကို တပ်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းကို စက်ကိရိယာဖြင့် ရောင်းချခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
လျှပ်စီးကြောင်း - မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများအတွင်း သင့်စက်ပစ္စည်းများအတွက် ထပ်လောင်းအကာအကွယ်ပေးရန်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းကို ပိုင်ရှင်မဲ့မထားဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုသည့်အခါ၊ ၎င်းကို နံရံပေါက်ပေါက်မှ ပလပ်ဖြုတ်ပြီး အင်တင်နာ သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုးစနစ်တစ်ခုခုကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းလှိုင်းများ တက်လာခြင်းကြောင့် စက်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အရာဝတ္ထုများနှင့် အရည်များ - မည်သည့်အရာဝတ္ထုအမျိုးအစားကိုမဆို အဖွင့်မှတစ်ဆင့် စက်ပစ္စည်းအတွင်းသို့ မတွန်းပါနှင့်၊ ၎င်းတို့သည် အန္တရာယ်ရှိသော ဗို့အားအမှတ်များ သို့မဟုတ် တာယာလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ထိတွေ့မိခြင်းကြောင့် စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်၏ရေဒီယိုကိရိယာကို ဂရုစိုက်ပါ၊ ကိရိယာ၏ထိပ်တွင် သို့မဟုတ် ရေ သို့မဟုတ် အခြားသောအရည်များကဲ့သို့သော အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းမဟုတ်သော အရာများကို ကိရိယာ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လိမ်းရန် ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်ရည်မရှိပါ သို့မဟုတ်၊ ရေစိုခံ။
ဘေးကင်းရေးစစ်ဆေးခြင်း - ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ပြီးမြောက်အောင် ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ကို ပြုပြင်ပြီးနောက်၊ စက်ပစ္စည်းသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှု ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် ဘေးကင်းရေး စစ်ဆေးခြင်းတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် ဝန်ဆောင်မှု နည်းပညာရှင်အား တောင်းဆိုပါ။
နံရံ သို့မဟုတ် မျက်နှာကျက် တပ်ဆင်ခြင်း - ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုချက်နှင့်အညီ နံရံ သို့မဟုတ် မျက်နှာကျက်တွင်သာ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
အပူ- စက်ပစ္စည်းများကို ရေတိုင်ကီများ၊ အပူထိန်းကိရိယာများ၊ မီးဖိုများ၊ သို့မဟုတ် အခြားအပူထုတ်ပေးသည့် ထုတ်ကုန်များ (အသံချဲ့စက်များအပါအဝင်) ကဲ့သို့သော အပူအရင်းအမြစ်များနှင့် ဝေးဝေးတွင် ထားရမည်။
ရေဒီယိုစခန်းတိုင်းအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ပါသည်။
ဤသည်မှာ ရေဒီယိုအော်ပရေတာများစွာ၏ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်- အသံလွှင့်စက်များသည် အလွန်စျေးကြီးသည်။ စက်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေသည့်အတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်၊ ဒါက တကယ်ဟုတ်လား။ အမှန်မှာ- ပိုမိုစျေးကြီးပြီး ခေတ်မီသော ရုပ်သံလွှင့်စက်များ ၊ အချိန်အခါအလိုက် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပိုမိုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
ပုံမှန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အချို့သော အသံလွှင့်ကိရိယာများအတွက် ဝယ်ယူသော ကုန်ကျစရိတ်သည် အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကြောင့် သင့်ဘူတာရုံရှိ စက်ပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ ရေဒီယိုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော စျေးကြီးသော အသံလွှင့်ကိရိယာများကို မကြာခဏ ပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ကြောင်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှ သေချာစေနိုင်ပါသည်။ ဘူတာရုံသည် တူညီသော အသံလွှင့်ကိရိယာအသစ်ကို အစားထိုးခြင်းအတွက် ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေသည်။ အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော LPFM ရေဒီယိုလိုင်းအချို့အတွက်၊ ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုကြာခြင်း သို့မဟုတ် အသံလွှင့်ကိရိယာများအတွက် အရည်အသွေးမြင့် အသံအချက်ပြမှုများ ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို လိုချင်ပါက ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ကိရိယာများကို အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ဘူတာရုံအသစ်ဖြစ်စေ ဘူတာရုံဟောင်းဖြစ်စေ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ထုတ်လွှင့်သည့်နေရာအတွက် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အသံလွှင့်ဌာနကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ဆိုးရွားသည့်ပြဿနာအချို့ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများကို ကူညီပေးနိုင်ပြီး ပြဿနာများမဖြစ်အောင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြန်လည်ကုစားနိုင်စေရန်၊ မဖြစ်ပေါ်မီ။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပေါ့ဆမှု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ၏ သက်တမ်းရင့်ခြင်းကြောင့် သင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှု ရုတ်တရက် လောင်ကျွမ်းသွားသောအခါတွင် ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို ရပ်တန့်သွားစေသည့် သင်၏ရေဒီယိုပရိုဂရမ်နားဆင်သူများသည် ညည်းညူပြီး အခြားပရိုဂရမ်များသို့ ပြောင်းသွားကြောင်း သေချာစေနိုင်ပါသည်။ မတူညီသောရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းနှင့် ဆိုးရွားသောရေဒီယိုအတွေ့အကြုံကို မလွဲမသွေ ချန်ထားခဲ့သည် - ၎င်းသည် စတင်တည်ထောင်ရန် ရန်ပုံငွေမရှိခြင်းထက် ပိုကြောက်စရာကောင်းပါသည်။
မသင့်လျော်သောလည်ပတ်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြုပြင်မှုတို့သည် အသံလွှင့်စက်များ၏ ပျက်စီးမှုကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများ၏ အသက်အန္တရာယ်ကိုပင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း အမြဲသတိထားပါ။
ထို့ကြောင့် အသစ်တည်ထောင်ထားသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအများစုအတွက် အသံလွှင့်စက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင် ဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများရရှိရန် ဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်းကိုလည်း ထားရှိပေးကာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ကိရိယာများကို မှန်ကန်စွာအသုံးပြုရန် အမြဲတောင်းဆိုခဲ့သည်။ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ သုံးလပတ် သို့မဟုတ် နှစ်စဉ်တွင် ရေဒီယိုဌာန၏ အလုံးစုံ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
FM ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုက်ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။
FCC မှ ထိန်းချုပ်ထားသော ကိုယ်ပိုင်စစ်ဆေးရေးပစ္စည်းများ-
1. အထွေထွေပစ္စည်းများ- မျှော်စင်မီးအိမ်နှင့် တာဝါဆေးဆေးစစ်ဆေးခြင်း။
2. လစဉ်သုံးပစ္စည်းများ- တာဝါတိုင်ခြံစည်းရိုးအတွက် လုံခြုံရေးစစ်ဆေးပါ၊ လုံခြုံပြီး လော့ခ်ချထားကြောင်း သေချာပါစေ။
3. သုံးလတစ်ကြိမ် ပစ္စည်းများ- exciter များအားလုံး၊ STL လက်ခံသူများ၊ TSL transmitter နှင့် မှတ်တမ်းများအားလုံးကို ကြိမ်နှုန်းစစ်ဆေးပါ။
4. နှစ်စဉ်အကြောင်းအရာများ- လိုင်စင်အားလုံးကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး စစ်ဆေးရန် အသင့်ဖြစ်နေကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်အားလုံးကို တိကျမှုကို စစ်ဆေးပါ။
1. အီလက်ထရွန်နစ်ပြွန် စသည်တို့ကဲ့သို့သော ပင်မ/အသင့်အနေအထားဖြင့် အသံလွှင့်ကိရိယာများ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးပါ။
2. ဟာမိုနီသည် သင့်လျော်သော လျော့ချမှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန်၊ လှိုင်းနှုန်းပေါ်တွင် ရှိနေကြောင်းနှင့် FM အချက်ပြမှု ထုတ်လွှင့်ရန် လုံလောက်သော ဘန်းဝဒ်ရှိကြောင်း သေချာစေရန် အင်တင်နာနှင့် ဂီယာလိုင်းကို စကင်န်ဖတ်ပါ။
3. လျှပ်စစ်တိုင်ကီနှင့် ဂျင်နရေတာ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လောင်စာအသုံးပြုပါက ၎င်း၏ဆီအဆင့်ကို စစ်ဆေးပြီး ဆီတိုင်ကီကို ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပါ။
4. site ၏အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပနံရံများရှိ သုတ်ဆေးများသည် အရောင်မှိန်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုတ်ကျခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး အချိန်မီ ပြုပြင်ပါ။
အပတ်စဉ် အထွေထွေ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-
1. ပုံမှန်မဟုတ်သော ရှေ့သို့ / ရောင်ပြန်ဟပ်သည့် ထုတ်လွှင့်မှုစနစ် သို့မဟုတ် STL စနစ်၏ အချက်ပြစွမ်းအားတန်ဖိုးကဲ့သို့သော ပုံမှန်မဟုတ်သော ရှေ့သို့ / ရောင်ပြန်ဟပ်သည့် ပါဝါ သို့မဟုတ် STL စနစ်၏ အချက်ပြစွမ်းအားတန်ဖိုးကဲ့သို့သော အသံလွှင့်ထုတ်လွှတ်သည့်ကိရိယာနှင့် STL စနစ်များကဲ့သို့သော အဓိက အသံလွှင့်ကိရိယာများ၏ အထူးဒေတာကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး အချိန်မီ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပါ။ Overload ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို မမေ့ပါနှင့်၊ ဝန်ပိုနေခြင်းကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် မူမမှန်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
2. စက်ပစ္စည်း၏လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ၊ ခေါင်မိုးမှရေယိုစိမ့်မှု၊ ပလပ်ပေါက်မှလျှပ်စစ်ဓာတ်များယိုစိမ့်မှု၊ သို့မဟုတ် နံရံပျက်စီးမှုကြောင့် ဘူတာရုံအတွင်းသို့ လေဝင်ရောက်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောအချက်များကဲ့သို့သော ပြင်ပမှပြင်းထန်သောအချက်များမရှိစေရန် သေချာပါစေ။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများအတွက် ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရရှိရန် အခန်းကို အချိန်မီရှင်းလင်းပါ။
3. စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်၏ ခိုင်မာမှုကို သေချာပါစေ။ ရေဒီယိုအခန်း၏ စက်ပစ္စည်းတန်ဖိုးသည် အလွန်မြင့်မားသောကြောင့် ရေဒီယိုခန်း (အထူးသဖြင့် အချို့သော ရေဒီယိုခန်းငယ်များ) တွင်နေရန် ဝန်ထမ်းများစေလွှတ်ခြင်းသည် လက်တွေ့မကျဘဲ ပါဝါထောက်ပံ့မှုစနစ်အပါအဝင် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ် ပြည့်စုံမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကင်မရာ၊ ကေဘယ်ကြိုး စသည်တို့ ပျက်စီးပါက အချိန်မီ ပြုပြင်ရမည်။
လစဉ် အထွေထွေ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-
1. အပတ်စဉ် ယူနစ်များတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက်စေသည့်အပြင်၊ အချို့သော အပိုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် မာလ်တီမီတာ မှတ်တမ်းများကို အပြည့်အစုံထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရေဒီယိုလေထွက်ကောင်းခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် အပိုရေဒီယိုအသံလွှင့်ကိရိယာကို dummy load ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
2. အဆိုပါအခြေခံအဆောက်အဦများ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန်နှင့် ပိုက်လိုင်း၊ ဆီတိုင်ကီ၊ ရေတိုင်ကီ၊ မီးခိုးအချက်ပေးသံ၊ မီးစက်စသည်တို့ကဲ့သို့သော စက်ခန်းအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အဦများကို စစ်ဆေးပြီး အလွန်အကျွံအတွင်းဖိအားကြောင့် ပေါက်ကွဲခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်၊ ပိုက်လိုင်းအချို့ ယိုစိမ့်မှု၊ ဂျင်နရေတာ ဆီတိုင်ကီ၏ ဆီယိုစိမ့်မှုနှင့် အခြား မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
3. အနီးနားရှိ အသံလွှင့်ဌာန လုံလုံလောက်လောက် ဖွင့်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ၊ အထူးသဖြင့် အပင်များ ပေါက်ရောက်သည့် နွေရာသီတွင် ဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်တင်နာ၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လွှမ်းခြုံမှုကို ရရှိရန်အတွက် အနီးနားရှိ နေရာများကို လုံလုံလောက်လောက် ဖွင့်ထားကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက ထိုအရပ်ရှည်သော အပင်များကို ခုတ်လှဲပါ။
4. အသံလွှင့်မျှော်စင်၏ ခြံစည်းရိုးနှင့် မျှော်စင်ပေါ်ရှိ မြေသားများ လုံလုံလောက်လောက် ခိုင်ခံ့မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး တာဝါတိုင်၏ ဝင်ပေါက်ကို သော့ခတ်ကာ မည်သူမျှ အလွယ်တကူ မဝင်ရောက်နိုင်စေရန်၊
5. အဝေးထိန်းကိရိယာကို အသံလွှင့်ကိရိယာဖြင့် ချိန်ညှိပါ။
သုံးလတစ်ကြိမ် အထွေထွေ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-
လစဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအပြင်၊ အထူးသဖြင့် FM exciter နှင့် STL စနစ်ကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော အသံလွှင့်ကိရိယာများအတွက် သတိမပြုမိသော အခြေခံအဆောက်အအုံအချို့ကို အချိန်မီထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပြီး ထိုအချိန်တွင်၊ လေစစ်၊ တာဝါတိုင်မီးနှင့် ဆေးသုတ်စစ်ဆေးခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ လိုအပ်သည်။
1. သုံးလပတ်လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ပြီးမြောက်စေသည့်အပြင်၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အားလုံးကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားကြောင်း သေချာစေရန် ရေဒီယိုအခန်းအားလုံး၏ လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်များကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာ ရေဒီယို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အခန်းကို စစ်ဆေးတဲ့အခါ ဒဏ်ငွေရိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
2. main/standby transmitter များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ၊ သို့သော် transmitter များထဲမှ တစ်ခုသည် အလုပ်လုပ်သော အခြေအနေတွင် ရှိနေကြောင်း သေချာပါစေ။ ဂျင်နရေတာနှင့် ဆက်စပ်ပတ်လမ်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်ခြင်း ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးပါ။
3. ဂီယာစနစ်၊ အင်တင်နာတာဝါနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ အပါအဝင် အင်တင်နာစနစ်၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါ။
ရေဒီယိုစတူဒီယိုကို ဘာကြောင့် ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်တာလဲ။
အသံလွှင့်စတူဒီယိုသည် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ်များကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး လုပ်ဆောင်သည့်နေရာဖြစ်သလို ခေတ်မီဆန်းပြားသော အသံပစ္စည်းများအတွက် သိုလှောင်ရာနေရာလည်းဖြစ်သည်။
အသံလွှင့်ဌာန၏ အသံပရိုဂရမ်အရည်အသွေးသည် အသံလွှင့်စတူဒီယိုရှိ ၀န်ထမ်းအားလုံး၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံကို လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မပြီးမြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် LPFM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများတွင်၊ စက်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ခံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသည့် အင်ဂျင်နီယာများအပြင်၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ရုပ်သံလွှင့်စတူဒီယိုတွင် ဆက်စပ်အသံလွှင့်စတူဒီယိုရှိ အသံပစ္စည်းများကို ပူးတွဲအသုံးပြုမည့် အခြားဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများလည်း ရှိပါမည်။
သို့သော် ရေဒီယိုတိုင်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လောက် မဟုတ်ပါ။ အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော ရေဒီယိုအချို့သည် ဘတ်ဂျက်ပြဿနာများကြောင့် အတွေ့အကြုံမရှိသော အသံလွှင့်ဌာနဝန်ထမ်းများကို ခေါ်ယူနိုင်ပြီး၊ အလုပ်ထိရောက်မှုနှင့် စက်အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းများတွင် ပြဿနာအချို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် စုဆောင်းနိုင်သော်လည်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သို့မဟုတ် မရည်ရွယ်ဘဲ လုပ်ဆောင်မှုများသည် အချို့သော ခေတ်မီဆန်းပြားသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေကာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များ တိုးမြင့်လာကာ ပုံမှန်ရေဒီယိုအစီအစဉ်များထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုပင် နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။ စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းအတွက် - သင့်စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ၏ ရေပန်းစားမှုတို့နှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေပါသည်။
ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောဝန်ထမ်းများအပြင်၊ အသံလွှင့်စတူဒီယို၏ညစ်ပတ်သောပတ်ဝန်းကျင်၊ စက်ကိရိယာညွှန်ကြားချက်များမရှိခြင်းနှင့် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသော စတူဒီယိုစည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများသည် ရုပ်သံလွှင့်စက်များအပေါ်တွင် ကြီးမားသောအပျက်သဘောဆောင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းသည် ရုပ်သံလွှင့်ဌာန၏စုစုပေါင်းဝင်ငွေကို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးအတွက်၊ ရေဒီယိုစတူဒီယိုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် လွယ်ကူသောကိစ္စမဟုတ်ပေ။ ရေဒီယိုဌာနမာစတာသည် ရေဒီယိုစခန်းရှိ ရည်ရွယ်ချက်အချက်များကို ရှုထောင့်များစွာမှ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိုင်းတာရန် လိုအပ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချနည်းကဲ့သို့သော ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုကို စီစဉ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အောက်ပါအကြောင်းအရာသည် ရေဒီယိုစတူဒီယိုတစ်ခု၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစာရင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် ရေဒီယိုစခန်းများကို အောင်မြင်စွာတည်ထောင်ပြီး ကျန်းမာစွာဆက်လက်လည်ပတ်နေသော FMUSER ၏ဖောက်သည်များ၏တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အခြေခံ၍ တည်းဖြတ်ထားပြီး၊ ရေဒီယိုစခန်းပိုင်ရှင်များ သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ပေးမည့် ဘူတာရုံပိုင်ရှင်များကို ကူညီပေးနိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။
1. စတူဒီယိုဝန်ထမ်းများအတွက် ကောင်းမွန်သော ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပါ။
ရေဒီယိုဌာနဝန်ထမ်းများသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်လက်အောက်ငယ်သားများအား အရည်အသွေးမြင့် ရေဒီယိုလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေရုံသာမက ရေဒီယိုဧည့်သည်များကို ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး သင့်ရေဒီယိုဌာနအတွက် ၎င်းတို့၏ စေတနာကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် အခြေခံအဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်မှုကို သေချာထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်းပါ။
သုံးစွဲသူများစွာသည် FMUSER မှ "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုမတည်ဆောက်မီအဘယ်သို့စဉ်းစားရမည်နည်း" ဟုမေးလိမ့်မည်။
အဖြေက တကယ်တော့ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်
ရေနှင့်လျှပ်စစ်မီးပေးဝေခြင်း။ - ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန၏ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုအတွက် လိုအပ်သောနေထိုင်မှုအခြေအနေများကို ပံ့ပိုးပေးပြီး တည်ငြိမ်သောရေနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဝေမှုသည် အရည်အသွေးမြင့်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို ထုတ်လွှင့်နိုင်စေပါသည်။
မတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် အခန်းများ - ဆေးလိပ်သောက်သည့်အခန်း၊ အသံသွင်းခန်း၊ နားနေခန်း၊ ရေချိုးခန်းနှင့် ကလေးကစားစရာနေရာတို့ကို သင့်ဘတ်ဂျက်အရ ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များ - ရေစင်၊ စက္ကူသုတ်ပုဝါ၊ လက်ဖက်ရည်အိုး၊ ကော်ဖီစက် နှင့် အဝတ်လျှော်စက်များပင်လျှင် လူတိုင်းကို အိမ်မှာ ခံစားရအောင်။
လိုအပ်သောပရိဘောဂ - ဆိုဖာများ၊ ကုလားထိုင်များ၊ ရေဒီယိုစခန်းများ... ဧည့်သည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် အလုပ်နှင့် အနားယူရန် နေရာများ ပေးဆောင်ပါ။
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - လေအေးပေးစက်များ၊ ရေခဲသေတ္တာများ၊ မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုများ... ရေဒီယိုစတူဒီယိုဝန်ထမ်းများ၏ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
စတူဒီယို Lighting - စားပွဲဆီမီး၊ မီးပဒေသာမီး၊ မီးမောင်းများ... ၎င်းသည် စတူဒီယိုရှိ လူတိုင်း၏ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
စတူဒီယိုအလှဆင် - ဒီဇိုင်းစတိုင်၊ ရေဒီယိုအပြင်အဆင်
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဒီဇိုင်း - အစိုဓာတ်ခံ၊ မီးကာကွယ်ရေး၊ လေဝင်လေထွက်... မင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကို ဘယ်တော့မှ အလဟသ မဖြစ်စေချင်ဘူး။
အထူးထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများ၊ ပိုးသတ်ထားသောအရက်၊ သာမိုမီတာ... Covid-19 ကပ်ရောဂါအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပါ။ "ရေဒီယိုစတူဒီယိုကို မင်းရဲ့ဒုတိယအိမ်အဖြစ် ယူပါ။
ကိုဗစ်-၁၉ ၏ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအောက်တွင်၊ အထူးသဖြင့် ရေဒီယိုစတူဒီယိုကဲ့သို့သော ကန့်သတ်နေရာအချို့တွင် တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်မှုကို အထူးအာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ၏ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအခြေအနေများကို သေချာစေရန်အတွက် အဆင့်နှစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်- အခြေခံသန့်ရှင်းရေးနှင့် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု - တစ်ကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းများကို ပိုးသတ်ခြင်း၊ အမှတ်အသားပြုခြင်းနှင့် တစ်စုတစ်စည်းတည်း သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် လက်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားခြင်း၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောအ၀တ်အစားများထားရှိခြင်း၊ တံတွေးထွေးခြင်း၊ အမှိုက်မပစ်ရစသည်ဖြင့်၊
Studio တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး - အိမ်မှပိုးမွှားဖယ်ရှားခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်း၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး၊ desktop သန့်ရှင်းရေး၊ ကော်ဇောသန့်ရှင်းရေး၊ ပရိဘောဂများ ပွတ်တိုက်ခြင်းစသည့် အပါအဝင် ရေဒီယိုစတူဒီယိုကို အခါအားလျော်စွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး - ဧည့်သည်များအတွက် အပူချိန်သိရှိခြင်း၊ မျက်နှာဖုံးများကို အမြဲဖွင့်ထားပြီး မလိုအပ်ပါက မချွတ်ရ၊ ဧည့်သည်များအသုံးပြုထားသော ရုပ်သံလွှင့်စက်များကို ပိုးသတ်ရန် အရက်ကို အမြဲသုံးရန်၊ ဧည့်သည်များအတွက် တစ်ခါသုံး နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ပေးခြင်း စသည် "သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော စတူဒီယိုသည် လူများကို အမြဲပျော်ရွှင်စေပါသည်။"
3) ရေဒီယိုစတူဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာစီမံခန့်ခွဲမှုကို မြှင့်တင်ပါ။
ထုတ်ကုန်လက်စွဲစာအုပ်များ မိတ္တူများ - အရေးကြီးသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အချက်အလက် ပျောက်ဆုံးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်၊ ရေဒီယို စတူဒီယို ကိရိယာ တစ်မျိုးစီတွင် ပင်မနှင့် အပိုပစ္စည်း ညွှန်ကြားချက် မိတ္တူ အနည်းငယ် ပါရှိရမည်။
Leadership ကိုရှာပါ။ - အထူးပုဂ္ဂိုလ်အား ရေဒီယို ဝန်ထမ်းများနှင့် ပေါင်းစည်းထားသော စက်ကိရိယာများ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ဘေးကင်းရေး သင်တန်းအတွက် တာဝန်ယူရမည်။
ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းလမ်းညွှန် - ထုတ်ကုန်လက်စွဲစာအုပ်များရေးပါ သို့မဟုတ် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသော အသံလွှင့်ကိရိယာအချို့အတွက် စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူများထံမှ လက်စွဲစာအုပ်များရယူရန် သို့မဟုတ် ပေါ်လာနိုင်သည့် အချို့သောစက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ FAQs များကို ပူးတွဲဖော်ပြရန်နှင့် ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းအား မတော်တဆထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန်အတွက် အချို့သောနေရာများတွင် စက်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါ ကြိုတင်သတိထားပါ။
ပြည်တွင်းသင်တန်း - အသံလွှင့်စတူဒီယိုဝန်ထမ်းများအတွက် အတွင်းပိုင်းသင်တန်းကို အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသော စတူဒီယိုစက်ပစ္စည်းများ၏ အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းများနှင့် ကြိုတင်သတိထားချက်များကို ရှင်းပြကာ လေ့ကျင့်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။
အကောင်းဆုံး သတ်မှတ်နေရာများ - အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရုပ်သံလွှင့်စက်များ ပျက်စီးသွားမည်ကို သင်ဘယ်တော့မှ မသိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ အတွင်းပိုင်းလေ့ကျင့်မှုနှင့် အသံလွှင့်စက်များတွင် အင်အားသုံးခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအပြင် ရေဒီယိုစက်ကိရိယာအတွက် အထူးနေရာတစ်ခုကိုလည်း ပြင်ဆင်ပြီး ကာကွယ်နိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထံသို့ ပစ္စည်းကိရိယာများရောက်ရှိနိုင်သော်လည်း ကလေးငယ်များ မတတ်နိုင်သောနေရာကို ရှာဖွေခြင်း၊ စတူဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် အလုပ်မလုပ်သည့်အခြေအနေတွင် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအကြား အလွန်အကျွံထိတွေ့မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုအတွက် သတိပေးစတစ်ကာအချို့ကို ကူးထည့်ပါ။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြတ်တောက်မှု အစီရင်ခံခြင်း။ - ရုပ်သံလွှင့်စတူဒီယိုရှိ စက်ကိရိယာများ မှားယွင်းသွားသည့်အခါ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို သတင်းပို့ရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများကို စီစဉ်ပေးရမည်၊ စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် နည်းပညာရှင်သာဖြစ်ကြောင်း မမေ့ပါနှင့်။ "မိမိလုပ်ငန်းကို အာရုံပြုရမည်"
2. ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်း။
ရေဒီယိုစတူဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဖိုင်များသည် စက်ကိရိယာကိုယ်နှိုက်ကဲ့သို့ပင် အရေးကြီးသည်၊ ထို့အပြင်၊ စတူဒီယိုတွင် အသံလွှင့်ကိရိယာ အမျိုးမျိုးရှိကာ ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်စံနှုန်းများမှာ ကွဲပြားသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများလည်း ကွဲပြားပါသည်။ သင့်တွင် သင့်ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းရောင်းချသူနှင့် တူညီသော ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်ကုန်အသိပညာစနစ်တွင် မရှိနိုင်ပါ၊ အချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပြီး အွန်လိုင်းတွင် စာရင်းမသွင်းထားသောကြောင့်၊ Googling ဖြင့် လက်စွဲစာအုပ်ပါ တူညီသော ပုံနှိပ်အချက်အလက်ကို ရယူရန် မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင် အချိန်တိုအတွင်း၊ အထူးသဖြင့် အရေးကြီးသောလက်စွဲစာအုပ်အချို့အတွက်ဖြစ်သည်။ထို့ပြင်၊ ဤပစ္စည်းများသည် သင့်အခပေးကုန်စည်၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းများ၏ အရေးပါမှုကို ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားထားပါ။ ၎င်းတို့ကို သင်ဆုံးရှုံးသွားပါက၊ တူညီသောလက်စွဲစာအုပ်ကို စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူထံမှ အခမဲ့ ထပ်မံရယူနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဤ "အခမဲ့ထုတ်ကုန်များ" ကို တင်ရန် မမေ့ပါနှင့်။
အရေးကြီးသော စက်ပစ္စည်းဖိုင်များကို စုစည်းပါ - ထုတ်ကုန်လက်စွဲသည် ရေဒီယိုစတူဒီယိုဖိုင်များထဲမှ အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် အမည်၊ မော်ဒယ်၊ ကန့်သတ်ချက်များ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်၏ အရေးကြီးသော အချက်အလက် အားလုံးကို ပါ၀င်သည်။ အချို့သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေဒီယို ပစ္စည်း ပေးသွင်းသူများသည် ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယို စတူဒီယို လှည့်ကီး ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါမည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်ရေဒီယိုအတွက် သင့်ဘတ်ဂျက်အတွက် အကောင်းဆုံးကိုက်ညီမည့် စတူဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာအစုံအလင်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲရုံသာမက စက်ကိရိယာများပေါ်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ပေးခြင်းများ (အခြေအနေများခွင့်ပြုပါက) နှင့် စတူဒီယိုပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏ ဝါယာကြိုးပုံများကို ချန်ထားခဲ့မည်ဖြစ်သည်။ အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် လစဉ် စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း အထူးသဖြင့် ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်း ဝိုင်ယာကြိုးများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင် ဝိုင်ယာကြိုးပုံသည် အမှားအယွင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် တိကျစွာ ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ခန့်အပ်ခြင်းနေရာ၏ ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုများကို ရိုက်ယူနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ သင့်အင်ဂျင်နီယာတွင် စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ သဲလွန်စများမရှိသောအခါ၊ ဤဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများသည် သူ့အား မီးတောက်သွားစေနိုင်သည်။
ထူးခြားသောမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှတ်တမ်းကိုဖန်တီးပါ - အကယ်၍ သင်သည် ရေဒီယိုဌာနမန်နေဂျာဖြစ်ပါက၊ ရေဒီယိုစတူဒီယိုနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်၏ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် သင့်တွင် တာဝန်ရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အသံလွှင့်ပရောဂျက်အပါအဝင် ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို အစမှအဆုံးမှတ်တမ်းတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင့်အတွေ့အကြုံများနှင့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပါရှိသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အသုံးပြုသည့်ကိရိယာစသည်ဖြင့်၊ ထို့ကြောင့် ဤမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှတ်တမ်းသည် ထူးခြားသင့်သည်။ RF နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အင်ဂျင်နီယာများသည် အသံလွှင့်စက်ကွင်း ထိန်းချုပ်မှုနှင့် စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အသီးသီး တာဝန်ရှိပါသည်။ သို့သော် ရေဒီယိုဌာန မန်နေဂျာအားလုံးသည် RF အင်ဂျင်နီယာများ မဟုတ်ကြပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအင်ဂျင်နီယာများအတွက်၊ ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းမှတ်တမ်းတစ်ခုလည်း လိုအပ်သော်လည်း မှတ်တမ်းတင်ထားသောအကြောင်းအရာသည် စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဖြေရှင်းချက်များကို ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ရှိနိုင်သည်။
Homebrew Equipment Manual - ဒါက စက်ကိရိယာ သင်ခန်းစာနဲ့ ပိုတူတယ်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများသည် အချို့သောသော့ချက်အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး ၎င်းကို ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုသင်ခန်းစာတွင် တည်းဖြတ်ပြီး စုစည်းနိုင်သည်၊ ဥပမာ- စက်၏မူလပါရာမီတာဆက်တင်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် စက်ကို မှန်ကန်လုံခြုံစွာဖွင့်/ပိတ်နည်းကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကဲ့သို့ စနစ် အရန်သိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် အသုံးပြုပြီးသော စက်ကိရိယာ အမျိုးအစားများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည့် စက်ကိရိယာ အလုံးစုံကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းအတွက် ပိုမိုထိရောက်သော နည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းသည် လေ့ကျင့်ရေးစရိတ်သက်သာပြီး ရေဒီယိုစခန်း၏ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာလျှော့ချရန် ကူညီပေးသည့် ကောင်းမွန်သော လက်စွဲစာအုပ်ဖြစ်ပြီး ရေဒီယိုအသစ်စက်စက်များအတွက် ၎င်းတို့သည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန၏ အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်း ပိုမိုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖိုင်တွဲအတွက် စုစည်းထားသော သိုလှောင်မှု - အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ထုတ်ကုန်လက်စွဲစာအုပ်၊ စက်ပစ္စည်းဝါယာကြိုးပုံ၊ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ဆိုဒ်၏ ရုပ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများ စသည်တို့ကို တစ်ပုံစံတည်း လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းနိုင်သည့်နေရာကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ FMUSER မှ ရေဒီယိုစတူဒီယိုစက်ကိရိယာတစ်ခုစီ၏ လိုအပ်သောဖိုင်အားလုံးကို အချိန်မီစုဆောင်းကာ အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သော၊ ခြောက်သွေ့ပြီး ပုံမှန်အပူချိန်နေရာတွင် စုစည်းရန်၊ အစိုဓာတ်ခံထုပ်ပိုးမှုအတိုင်းအတာများကို ပြုလုပ်ရန် မမေ့ပါနှင့်။ စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကို အချိန်မီလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ စက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပစ္စည်းများကို ပထမအကြိမ်တွင် ရယူနိုင်သည်။
3. သင့်ကိုယ်ပိုင် အကောင်းဆုံး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ပါ။
အသံလွှင့်စက်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် သာမန်ထုတ်ကုန်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ကွဲပြားသည်။ အသံလွှင့်စက်များသည် ပိုမိုတိကျပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ရေဒီယိုစတူဒီယိုတွင် စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မလုပ်မီ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဘတ်ဂျက်ကို ဦးစွာ စဉ်းစားသင့်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် လူအင်အားနှင့် အရင်းအမြစ်များသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် မရှိမဖြစ်အချက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပါသည်။ လုံလောက်သော စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရန်ပုံငွေများနှင့် စုဆောင်းရေးဘတ်ဂျက်များသည် မကြာခဏဆိုသလို ပိုမိုကောင်းမွန်သော စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများကို မကြာခဏ ခေါ်ယူနိုင်သော်လည်း အသေးစိတ်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်များကဲ့သို့သော အခြားအရင်းအမြစ်များသည် လူအင်အားနှင့် ရန်ပုံငွေများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး အသံလွှင့်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို လမ်းညွှန်ကူညီပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အစီအစဉ်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ မည်ကဲ့သို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်စေကာမူ၊ အမှန်တကယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစဉ်တွင် မမျှော်လင့်ထားသော အပြောင်းအလဲများ အမြဲရှိနေမည်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။
အောက်ပါ အကြောင်းအရာများသည် ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာန ကိရိယာများကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သော အရေးကြီးသော အချက်အချို့ ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် ရေဒီယိုဌာနဒါရိုက်တာ၊ RF နည်းပညာရှင်နှင့် စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း တောင်းဆိုနိုင်သော်လည်း အမှန်မှာ သင့်တွင် တစ်ရက်လျှင် 24 နာရီသာ ရှိသည်၊ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သော စက်ကိရိယာအတွက် နာရီပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်ပြီး၊ သင်သည် စက်ကိရိယာဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ချက်အား မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် အချိန်အနည်းငယ်ယူရပေမည်။
ဒီတော့ ဒီတာဝန်တွေကို သီးခြားဝန်ထမ်းတွေဆီ ခွဲဝေပေးဖို့ ဘာကြောင့် မကြိုးစားတာလဲ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ သင့်တွင် ရေဒီယိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိလျှင် ... ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့အား အသေးစိတ် အလုပ်အစီရင်ခံစာတစ်ခုပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုပြီး အကြံပြုချက်အချို့ကို တင်ပြနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် သင်၏အကြီးမားဆုံးသောအားသာချက်ကို အပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်သည်
အကြံပြုချက်များ- ရေဒီယိုစခန်းတစ်ခုတွင် မတူညီသော ထုတ်လွှင့်မှုအခန်းကဏ္ဍများ
ကြေညာသူ - ကြေငြာသူများသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် ပြောဆိုကြပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကြေညာချက်များ စသည်တို့အတွက် တာဝန်ရှိသည်။
အင်ဂျင်နီယာချုပ် - ရေဒီယိုဌာန၏ နည်းပညာရှင်အကြီးအကဲ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကြီးကြပ်မှု၊ စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ ရေဒီယိုထိန်းချုပ်မှု၊ ရေဒီယိုစခန်းများကို လိုက်နာမှုနှင့် တရားဝင်စစ်ဆေးခြင်းစသည်ဖြင့် တာဝန်ရှိသည်။
Maintenance Engineer - အင်ဂျင်နီယာချုပ်၏ တာဝန်များနှင့် ဆင်တူသည်၊ ၎င်းသည် နားထောင်သူများထံမှ တိုင်ကြားချက်များကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အသံလွှင့်စက်များကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအတွက် အထူးတာဝန်ရှိသည်။
ဂီတဒါရိုက်တာ - ရေဒီယိုဂီတစာကြည့်တိုက်ကို ကိုင်တွယ်ရန်၊ ရေဒီယို စျေးကွက်ရှာဖွေရေး လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်၊ လူထုဆက်ဆံရေး စသည်ဖြင့် ကိုင်တွယ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
သတင်းဒါရိုက်တာ - သတင်းရင်းမြစ်များနှင့် ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ သတင်းဌာန၏ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း စသည်ဖြင့် တာဝန်ယူ၊
On-air personalities - အမှန်တကယ်ထုတ်လွှင့်သည့် ဇာတ်လမ်းကို ပြောပြရန် တာဝန်ရှိသည်။ သူက အသံလွှင့်ဌာနရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ပြီး ကြေညာသူနဲ့ မတူပါဘူး။
ထုတ်လုပ်ရေးဒါရိုက်တာ - ရေဒီယိုအစီအစဉ်များနှင့် အချို့သော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတို့အတွက် တာဝန်ရှိပြီး ရေဒီယိုအစီအစဉ်ထွက်ရှိမှု လုပ်ငန်းစဉ်၏ သွက်လက်မှုကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊
ပရိုဂရမ်ဒါရိုက်တာ - ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ၏ နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာများ၏ စည်းမျဉ်းနှင့် ကြီးကြပ်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ဒါရိုက်တာ - ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန၏ ပြင်ပပုံရိပ်ကို လူသိများစေရန်နှင့် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
ဘူတာရုံမန်နေဂျာ - ဝန်ထမ်းစုဆောင်းရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး၊ ရေဒီယိုအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအချိန်ဇယားရေးဆွဲခြင်း၊ ရေဒီယိုဌာနဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစသည့် ရေဒီယိုဌာန၏နေ့စဥ်ရေးရာများအားလုံးအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
သင့်တွင် စုဆောင်းရန်အတွက် ဘတ်ဂျက်အလုံအလောက်ရှိပါက သင့်ရေဒီယိုစခန်း၏နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် တာဝန်ယူနိုင်ပြီး ရှုပ်ထွေးသောရေဒီယိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းကို မျှဝေကူညီပေးနိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်သောရေဒီယိုအမှုထမ်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။
အချို့သော အလုပ်သင်များ သို့မဟုတ် ရပ်ရွာရေဒီယိုစေတနာ့ဝန်ထမ်း အသီးသီးခေါ်ယူရန်လည်း အခွင့်အရေးယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို တိုးလာစေသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့် အချို့သော စက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများ အလုပ်မှ ပျက်ကွက်သည့်အခါ ရေဒီယိုစက်ကိရိယာများ၏ လုံခြုံစွာလည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
2) ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ စက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကို ဂရုတစိုက်စဉ်းစားပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင့်တွင် အသံလွှင့်ကိရိယာဆိုင်ရာ အလွန်ကျွမ်းကျင်သော အသိပညာစနစ်တစ်ခုရှိလျှင် သင်သည် အသံလွှင့်ဌာန၏ ဘူတာရုံမှူး သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော် RF ကျွမ်းကျင်သူ အင်ဂျင်နီယာများကဲ့သို့ ရေဒီယို စက်ပစ္စည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အများစုသည် ကျွမ်းကျင်သော ရေဒီယို စက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦး၏ စုဆောင်းမှု ကုန်ကျစရိတ် အလွန်မြင့်မားသောကြောင့် အထွေထွေ ရုပ်သံလွှင့်ဌာန စက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်မှာ စိတ်ကူးယဉ်၍ မရနိုင်ပါ။
ထို့အပြင်၊ သင့်အား ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော ရုပ်သံလွှင့်စက်များ ပေးသွင်းသူများသည် သင့်နှင့် ကီလိုမီတာရာနှင့်ချီဝေးကွာသော သို့မဟုတ် သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ခြမ်းရှိ အချို့နေရာများတွင်ပင် သင်သာမန်စက်ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်ထက် အဆများစွာ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ - အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် အဆိုပါ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများကို သမုဒ္ဒရာတစ်ခွင်ရှိ ပေးသွင်းသူထံ ပေးပို့ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်သည် ၎င်းတို့၏ အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာနိုင်သည် - ပျက်စီးနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးရန်အတွက် သင့်ရေဒီယိုဌာနအနီးရှိ အစိတ်အပိုင်းအသစ်များကို ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ငှားရန်၊ သို့သော် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သင်ရွေးချယ်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဗျူဟာအတွက် သင်ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအချို့ရှိ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနပိုင်ရှင်များအတွက်၊ ကြီးမားသောရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်များကို မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာဖြတ်ကျော်၍ စက်ကိရိယာထုတ်လုပ်သူထံ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိပါ။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် အေဂျင်စီ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ် ကြီးမြင့်မှုသည် ၎င်းတို့ကို လွှမ်းမိုးနေသည်။
ဤဥပဒေဖြင့် Fmuser သည် လိုအပ်သော စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ဤကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် ဘုံနည်းလမ်းအချို့ကို တင်ပြထားပြီး၊ အချို့သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနပိုင်ရှင်များသည် မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ပြဿနာမှ ကင်းဝေးစေရန် ကူညီပေးနိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ အသုံးများသော စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ်များ ပါဝင်သည်-
အဓိပ္ပာယ်: သင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းများကို စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူထံ စာပို့ရန် လိုအပ်သည့်အခါ၊ ဤစာပို့ကိရိယာ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို သင် ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းမှတဆင့် သင်သည် မြင့်မားသောအမြန်ကုန်ကျစရိတ်များကို မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ဒေသတွင်း အသံလွှင့်စက်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ စက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူရန် အချို့သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အခကြေးငွေကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မလုံခြုံပါ- ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ပံ့ပိုးပေးသော စက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စံနှုန်းများသည် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီခြင်း ရှိ၊ မရှိ ခန့်မှန်း၍ မရပါ။
အကယ်၍ သင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းများသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် ဒေါ်လာရာနှင့်ချီပြီးသည့်တိုင် ယခင်ကကဲ့သို့ ချောမွေ့စွာ အလုပ်မလုပ်သေးပါက၊ သင်သည် အလားတူကိရိယာများကို ပေးသွင်းသူထံမှ ထပ်မံဝယ်ယူရန် လိုအပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းမှာ အခြားကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်- သင့်အသံလွှင့်စက်ကိရိယာသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင့်အား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသူများအတွက် သင်ငွေပေးချေရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်အချို့ ပါဝင်သည်-
စက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများ၏ လစာ
ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် (တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် တစ်နာရီလျှင်)
စက်ပစ္စည်း အမြန်ဝန်ထမ်းစရိတ် (အမြန်ကုမ္ပဏီများကို တစ်ကြိမ်တည်းပေးဆောင်လေ့ရှိသည်)
စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူများ၏ သွားလာရေးကုန်ကျစရိတ်များ (သင်သည် သင့်စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူနှင့်နီးစပ်ပြီး ဆိုက်တွင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို စီစဉ်လိုပါက၊ နေရာထိုင်ခင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စကကဲ့သို့သော သင့်စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူထံမှ ဝန်ထမ်းအချို့၏ကုန်ကျစရိတ်များကို သင်ပေးချေရန် လိုအပ်ပါသည်)
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ သင်သည် ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်၏ အသုံးစရိတ်ကို ရှောင်လွှဲ၍မရပါ၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်လုပ်ငန်းအားလုံးကို တစ်ယောက်တည်းတာဝန်မယူလိုပါက၊ ထို့နောက် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန၏ စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်၏ အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် သင်ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်ကို ယူရပါမည်။
အမှန်မှာ၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့် ဒေသများရှိ ရေဒီယိုအချို့တွင်ပင်၊ လက်စွဲထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်သည် မလွှဲမရှောင်သာအကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ရေဒီယိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်အချို့အားဖြင့် မလိုအပ်သော လက်စွဲစာအုပ်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို များစွာလျှော့ချနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စက်ပစ္စည်းများအမြန်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်စကများကို စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူများမှ စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်သားများ ငှားရမ်းစရိတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် သင့်ဘတ်ဂျက်နှင့် အကောင်းဆုံးကိုက်ညီမည့် စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်ကို အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ ပံ့ပိုးပေးသည့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ဆောင်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက (စက်ကိရိယာရောင်းချသူ သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကုမ္ပဏီကဲ့သို့)၊ သင်သည် ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းများအတွက် အခြေခံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းကို ပိုမိုရင်းနှီးလာပြီး အဆက်မပြတ်လေ့လာလေ့ကျင့်ပါ။ ဤနည်းဖြင့်သာ စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ သတိပြုမိစေရန်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချကာ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် ရေရှည်လည်ပတ်နိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ အစားထိုး ကုန်ကျစရိတ်
စွမ်းအားမြင့် FM အသံလွှင့်စက်များကဲ့သို့သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ၊ အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ခွံနှင့် အချို့သော အဝင်နှင့် အထွက်ကြားခံများအပြင်၊ အသံချဲ့စက်များ၊ တီးခတ်ကိရိယာများ၊ ဆားကစ်ဘုတ်များစသည်ဖြင့် core အစိတ်အပိုင်းများစွာကို ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန်၊ ငွေကုန်ကြေးကျများပါစေ။
အကယ်၍ သင်သည် ရေဒီယိုပစ္စည်းရောင်းချသူနှင့် ဝေးကွာနေပြီး မတော်တဆ သင့်ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်း၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းအချို့ မီးလောင်သွားပါက၊ အဆိုပါ အခွန်အပါအဝင် အစိတ်အပိုင်းများကို ပေးသွင်းသူ၏ဝဘ်ဆိုဒ်များမှ ထပ်ခါတလဲလဲ မှာယူနိုင်ပြီး သယ်ယူစရိတ်ကြီးမြင့်မှုအတွက် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သို့မဟုတ် အနီးနားရှိ ဆင်တူသော အစိတ်အပိုင်းများကို သင်ရွေးချယ်ဝယ်ယူကာ ၎င်းတို့၏ စက်ပစ္စည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အင်ဂျင်နီယာကို ၎င်းတို့၏ အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုနိုင်သော်လည်း အစိတ်အပိုင်းများကြား အနည်းငယ် ကွဲလွဲမှုများသည် ၎င်းတို့နှင့် ပျက်စီးနေသော အသံလွှင့်စက်များကြား မတိုက်ဆိုင်မှု ဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်ပိုက်ဆံများ ဖြစ်နိုင်သည် အလဟသ ဖြစ်ကြပြီ။
သင်ဝယ်ယူခဲ့သော ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်များကို လျှော့ချရန်မျှော်လင့်ပါက၊ အော်ဒါမတင်မီ အကောင်းဆုံးရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းရောင်းချသူအား ရွေးချယ်သင့်သည်။
သို့သော် ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူမှ ပံ့ပိုးပေးသော ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းများနှင့်ပင် ရေရှည်ဝန်ဆောင်မှုမြင့်မားသော လုပ်ဆောင်ချက်သည် အိုမင်းမှုနှင့် ချို့ယွင်းမှုကဲ့သို့သော စက်အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို မလွဲမသွေ ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ကို သင်နားလည်ထားသင့်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် အချိန်အခါအလိုက် ရေဒီယို အသံလွှင့်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအား အထူးဂရုပြုရန် လိုအပ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ကြီးမားသော ရေဒီယိုပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ရခက်ခဲသော၊ အလုပ်မှတ်တမ်းတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားရန် လိုအပ်ပြီး အလားတူပြဿနာ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ရန်နှင့်၊ core အစိတ်အပိုင်းများအစားထိုးကုန်ကျစရိတ်။
ထို့အပြင် ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းတစ်ခုခု ပျက်ကွက်ပြီး အရေးပေါ်ပြုပြင်မှု လိုအပ်ပါက၊ အချိန်အတော်ကြာ လေသေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နားဆင်သူများ ဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက်၊ ထိခိုက်လွယ်ပြီး မကြာခဏ လိုအပ်သော မကြာခဏ အစားထိုးလဲလှယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သည် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူထံ ဆက်သွယ်ပါ။ နေ့စဥ်သုံးပစ္စည်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလမ်းညွှန် သို့မဟုတ် အခြားအွန်လိုင်း/ဆိုက်တွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရန် ၎င်းတို့အား တောင်းဆိုပါ။
စက်ပစ္စည်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် အလွန်အရေးကြီးပြီး ဤလုပ်ငန်းကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရန် စွမ်းအင်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များစွာကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် သင့်ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ရှည်ကြာအောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။
စက်ပစ္စည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ်များ စီစဉ်ခြင်း၏ အရေးပါမှုသည် ထိုအရေးကြီးဆုံး အဆင့်များအားလုံးထက် ကျော်လွန်ပါသည်။ ရေဒီယိုဌာန၏ ၀င်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်လက်ကျန်ကို သင်နောက်ဆုံးနားလည်လာသောအခါ၊ စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဘတ်ဂျက်အဖြစ် ဝင်ငွေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ခွဲဝေပေးရန် မတွန့်တိုပါနှင့်။
သင့်တွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတအချို့ရှိပါက၊ စက်ကိရိယာပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးဘတ်ဂျက်သည် အမှန်တကယ် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပြုအမူတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သင်အလွယ်တကူနားလည်နိုင်ပါသည်- ရေဒီယိုစခန်းတစ်ခုသည် နှစ်အတော်ကြာ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသောအခါ၊ ရုပ်သံလွှင့်ကိရိယာများ ဟောင်းနွမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းစသည့် ပြဿနာများစွာဖြင့်၊ ထို့နောက်၊ ရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး။
သို့သော်၊ စက်ပစ္စည်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် စက်ဝတ်ဆင်မှုပမာဏကို သင့်လျော်စွာ လျှော့ချနိုင်ပြီး ၎င်း၏အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်၊ သင်နှင့် သင့်ပရိသတ်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ၎င်းတို့အား သင့်ရေဒီယိုဌာနတွင် ထာဝစဉ်နေခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်း အမြဲသတိရပါ။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ ရှိသော်လည်း ဤကိရိယာမျိုးအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်မှာ အမြဲမြင့်မားသော်လည်း အသုံးပြုပြီးသားကို ထိန်းသိမ်းမည့်အစား တူညီသောစက်ပစ္စည်းအသစ်အတွက် အော်ဒါတင်ရန် ရွေးချယ်ပါက၊ သင်အသုံးပြုသော ပစ္စည်းကို ထိန်းသိမ်းမည့်အစား အဆများစွာ ပေးချေနိုင်ပါသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်။ ယင်းအစား၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ရေဒီယိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှုအားဖြင့်၊ သင်၏ ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းများကို အချိန်အကြာကြီး ချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်စေရန် သေချာစေနိုင်သည်။ ချို့ယွင်းချက်အချို့ရှိလျှင်ပင်၊ စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဥ်ကို ပြီးပြည့်စုံစွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် လုံလောက်သော ဘတ်ဂျက်ရှိနိုင်ပါသည်။
အရင်းအနှီးနှင့် ဘတ်ဂျက်သည် ရေဒီယိုဌာနပိုင်ရှင်တိုင်းအတွက် ထာဝရအကြောင်းအရာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခု၏ ရှင်သန်မှုအတွက် အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်သည်။
စက်ကိရိယာများ အဆင်မပြေပါက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းကို သင်၏စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန် ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်း မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များစွာကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်၏စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဘတ်ဂျက်ကို ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကူညီရန် အကြံဉာဏ်များစွာရှိပါသည်။
အမြဲသတိရပါ- လစဉ်ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်းကို ဖန်တီးပါ။
သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ- ထိုကုန်ကျစရိတ်များသည် အမှန်တကယ် လိုအပ်ပါသလား။
ခြားနားချက်ကို သိပါ- တစ်ကြိမ်နှင့် ဆက်တိုက်ကုန်ကျစရိတ်
က) သင်၏လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့် စုဆောင်းငွေများကို စာရင်းပြုစုပါ။
စက်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများသည် ရေဒီယိုလုပ်ငန်း၏ ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်သင့်သည်။ ဒီ့ထက်အရေးကြီးတဲ့ တခြားအချက်တွေ အများကြီးရှိသေးတယ်လို့ သင်ထင်နေရင်တောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းတာကြောင့် ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကို ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်း ရေဒီယိုပစ္စည်းတစ်ခုခု အလုပ်မလုပ်တော့ရင် နာကျင်တဲ့စျေးနှုန်းကို ပေးဆောင်ရမှာပါ။
၎င်းသည် သင်၏ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန၏ လစဉ်အသုံးစရိတ်များနှင့် စုဆောင်းငွေများကို စာရင်းပြုစုရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဝယ်ယူမှုများအတွက် ဘတ်ဂျက်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ခွဲဝေပေးရန် သတိပေးထားသည်။
အထူးသဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဘတ်ဂျက်အပေါ် အကဲဆတ်သော အချို့သော ရေဒီယိုလိုင်းများအတွက်၊ စက်ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ရေဒီယိုဌာန၏ လစဉ်ဝင်ငွေ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ချွေတာခြင်းသည် အလွန်ပညာရှိသော်လည်း ငွေကို ခေတ္တအသုံးမပြုနိုင်သော်လည်း အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။ မည်သည့်ရေဒီယိုပစ္စည်းကိုမဆို အစားထိုးရန် သို့မဟုတ် နောင်တွင် ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းများတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ထို့အပြင်၊ လစဉ် စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဘတ်ဂျက်သည် သင့်အား စိတ်အေးချမ်းသာစွာ ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် သင်၏စုဆောင်းငွေ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖယ်ထားလိုက်ပါ။
b) လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် မလိုအပ်ပါ။
ဘူတာရုံ၏ သုံးလပတ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများတွင် အရေးမကြီးသော အသုံးစရိတ်အချို့ အမြဲရှိနေမည်ဖြစ်သော်လည်း မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်များသည် လိုအပ်ပြီး ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိပါသည်။
အချို့သော မလိုအပ်သော အသုံးစရိတ်များသည် လိုအပ်သော အသုံးစရိတ်များထက် ပိုများနေသည်ကို တွေ့ရှိပါက၊ သင့်ဝင်ငွေကို အရေးမကြီးသော နေရာများတွင် အသုံးပြုခြင်းရှိမရှိ သတိပေးပြီး လက်တွေ့အခြေအနေအရ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပါ။
ဂ) တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသလား။
ရေဒီယိုလိုင်းတစ်ခုရှိ ဝန်ထမ်းတိုင်း၊ ဘူတာမန်နေဂျာ၊ RF အင်ဂျင်နီယာမှ ရေဒီယိုလက်ခံသူအထိ၊ ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းအားလုံး၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် တစ်ကြိမ်တည်းကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
စက်ပစ္စည်းအများစုကို မကြာခဏ လဲလှယ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ ၎င်းသည် ဘူတာရုံပိုင်ရှင်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် ကြီးမားမည်မှာ သေချာပါသည်။ ဘူတာရုံအင်ဂျင်နီယာအတွက်၊ ၎င်းသည် အပိုပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆိုလိုသည်။
ရေဒီယို အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအတွက်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် စက်ကိရိယာအသုံးပြုပုံကို လေ့လာရန် အချိန်ပိုလိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အသံသွင်းကိရိယာများနှင့် ပရိဘောဂအချို့ကဲ့သို့သော တစ်ကြိမ်တည်းကုန်ကျစရိတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအား စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားပါက သင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အချို့သော စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် မကြာခဏ အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။
အခြားရေဒီယို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ်များဖြစ်သည့် နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်စီးခ၊ အသုံးအဆောင်များ စသည်တို့သည် စဉ်ဆက်မပြတ် အသုံးစရိတ်များဖြစ်သည်။ သင့်ဘတ်ဂျက်မလုံလောက်ပါက၊ သင်သည် တစ်ကြိမ်သုံးကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပြီး လိုအပ်ပါက စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်အဖြစ် ဘတ်ဂျက်၏ဤအစိတ်အပိုင်းကို လွှဲပြောင်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
4. သင့်ဘူတာရုံရေးရာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲပါ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဘူတာရုံမန်နေဂျာသည် ဘူတာရုံ၏ကိစ္စရပ်အားလုံးကို တာဝန်ယူသင့်သော်လည်း ဘူတာရုံမန်နေဂျာတစ်ဦးတည်းသာ အကြီးစားဝန်ထမ်းနှင့် စက်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို မအောင်မြင်နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် အသေးစိတ် ဘူတာရုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲပြီး အချိန်အခါအလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အသံပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် တံခါးသော့များပင်။ စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ သင်ဝယ်ယူထားသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနနှင့် စတူဒီယိုပစ္စည်းများအားလုံးကို ရေတွက်ကာ၊ ဤစက်ပစ္စည်း၏အမည်များကို အမျိုးအစားခွဲကာ ၎င်းတို့အား သိမ်းဆည်းရန်အတွက် သင်၏ကွန်ပျူတာဒေတာဘေ့စ်သို့ ထည့်သွင်းသင့်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဌာနတစ်ခုစီ၏ တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း အမည်ပေးသင့်သည်။ စက်ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အစီအစဉ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းကဲ့သို့သော အသံလွှင့်ဆိုက်တွင် အထူးပြဿနာအချို့ရှိနေသောအခါ ဌာနတစ်ခုစီသည် လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်သည်။
စက်ပစ္စည်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများသည် စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတ်တမ်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်းငံ့ရခြင်းအကြောင်းအရင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြရန် တာဝန်ရှိသော ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းအား အိမ်ရှင်ထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါနေရာရှိ ကွပ်ကဲမှုတာဝန်ခံ၊ အဓိက တာဝန်ခံထံ လွှဲပြောင်းပေးမည် စသဖြင့် ... အရာအားလုံးက စနစ်တကျ ဖြစ်ပုံရသည် မဟုတ်လား။ အဓိကအချက်မှာ သင်သည် ဤရုပ်သံလွှင့်ကိရိယာနှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံအတွက် စီစဉ်မှုများ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
2) ရေဒီယိုဝန်ထမ်းတိုင်းအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှု
ရေဒီယိုအိမ်ရှင်၊ RF အင်ဂျင်နီယာ၊ ဆိုက်တွင်းဝန်ထမ်း၊ မီးထွန်းသူနှင့် ရေဒီယိုဧည့်သည်များပင်လျှင် ဤအခန်းကဏ္ဍများအားလုံးသည် မတူညီသောတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေကြပါသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ မရှိခြင်းသည် သင့်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို ထုတ်လွှင့်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်စွာ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအား ဆုံးရှုံးသွားစေသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ရေဒီယိုဌာန မန်နေဂျာဖြစ်ခဲ့ပါက၊ သင်သည် ရေဒီယိုအစီအစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကြိုတင်သိရှိထားသင့်ပြီး အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ အသံလွှင့်ခြင်းအထိ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးကာ ဝန်ထမ်းအချို့ ရုတ်တရက် ထွက်ခွာသွားသည့်အခါ သို့မဟုတ် ထွက်ခွာခွင့်တောင်းသည့်အခါတွင် တုံ့ပြန်ခြင်း၊ ရေဒီယို၏ အလုံးစုံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ၏ ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုကို သေချာစေရန်
၃) ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်းအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှု
ရေဒီယိုပရိုဂရမ်များ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ ရေဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ ဝန်ထမ်းလွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်စသည်ဖြင့် ... ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုစီ၏ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် အထူးစာရွက်စာတမ်းများကို ပြုစုထားသင့်သည်။ ရေဒီယို ဝန်ထမ်းအသစ်များ ခေါ်ယူရန် အဆင်သင့်ဖြစ်သောအခါတွင် ၎င်းတို့အား ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လည်ပတ်မှုသေချာစေရန် ဤမှတ်တမ်းများမှတစ်ဆင့် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါသည်။
5. ကျွမ်းကျင်သော ရေဒီယိုဘူတာရုံ စက်ပစ္စည်း ပေးသွင်းသူအား ရှာဖွေပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင် ကျွမ်းကျင်သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပေးသွင်းသူတစ်ဦးရှိပါက ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါသည်။ အခြေခံရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနကိရိယာများအပြင် စက်ပစ္စည်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့သော အထူးဝန်ဆောင်မှုအချို့ကိုလည်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အတော်လေးပြည့်စုံသော ရေဒီယို turnkey ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို သင်မကြာခဏရရှိနိုင်ပါသည်။
သို့သော်၊ သင်၏စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူသည် ဤဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးသည်ရှိ၊ မရှိသည် သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့် ဘတ်ဂျက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနှင့် ဒေသများရှိ ရေဒီယိုလိုင်းများသည် ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနဆိုင်ရာ ပစ္စည်းစာရင်းများမှ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအထိ အလှည့်ကျဝန်ဆောင်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် အသံလွှင့်ကျွမ်းကျင်မှု မရှိခြင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်မလုံလောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
အချို့သော ဘူတာရုံမန်နေဂျာများသည် ဘူတာရုံတိုင်းတွင် စက်ကိရိယာများကို ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင်ပြီး ထိန်းကျောင်းကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စက်ပစ္စည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေသည့် မလျော်ကန်သော လည်ပတ်မှုကြောင့် စက်ပစ္စည်းများတွင် မလိုအပ်သော ထိခိုက်မှုအချို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံတည်ဆောက်မှုအစီအစဉ်၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသောစက်ပစ္စည်းရောင်းချသူအားရှာဖွေသောအခါ၊ စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ယူခြင်းအပြင်၊ အထူးသဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသောစိတ်ပါဝင်စားသောစက်ပစ္စည်းရောင်းချသူများနှင့်ထပ်မံထိန်းသိမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သာ၊ သင့်ရေဒီယိုဌာနသည် စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွေ့အကြုံမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲသော စက်ကိရိယာပြဿနာများကြုံတွေ့ရသောအခါ အကူအညီမဲ့ဖြစ်နေသောအခါ၊ သင်သည် အကူအညီအတွက် ရေဒီယိုစက်ကိရိယာရောင်းချသူထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချို့သည် ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရှာဖွေနေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချို့က မကြာခဏမေးမြန်းလေ့ရှိသည့် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ၏ စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အချို့ဖြစ်သည်။
ဘူတာရုံကို အောင်မြင်စွာ တည်ထောင်ပြီး နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော စက်ပစ္စည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်ကို ပံ့ပိုးပါ။
အခမဲ့ အသံလွှင့်စက်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လက်စွဲနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ ပေးပါ။
အချို့သော ရုပ်သံလွှင့်စက်များသည် စာပို့ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်သည့်အခါ၊ ၎င်းတို့သည် အမြန်ကုန်ကျစရိတ်ကို ပူးတွဲကျခံရမည်။
တယ်လီဖုန်းနှင့် ကွန်ရက်အပါအဝင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အွန်လိုင်းစက်ပစ္စည်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပံ့ပိုးမှုပေးပါ။
စက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများအတွက် ဆိုက်အတွင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လမ်းညွှန်ချက် ပေးပါ။
အာမခံအချိန်ကန့်သတ်ချက်အတွင်း၊ လူမဟုတ်သောအချက်အချို့ကြောင့် စက်ပျက်စီးသွားသည့်အခါ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများကို အစားထိုးနိုင်သည်။
မှတ်စု: သင်သည် ဤပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ဆောင်မှုများကို စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူနှင့် ဆွေးနွေးသောအခါ၊ ၎င်းတို့ကို စာချုပ် သို့မဟုတ် စာသားတွင် အကောင်အထည်ဖော်ပါ၊ သင်၏စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူမှ သင့်အား ကတိပြုထားသည်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
FMUSER သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေဒီယိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရေဒီယိုစက်ကိရိယာအစုံအလင်၊ ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစနစ်များနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများအပါအဝင် မတူညီသောဘတ်ဂျက်များဖြင့် ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူများအတွက် အရည်အသွေးမြင့်ဖြေရှင်းနည်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ FMUSER သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန ကျွမ်းကျင်မန်နေဂျာလည်းဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန အမျိုးအစားအားလုံးကို ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်၏ဘတ်ဂျက်မှစတင်၍ သင်၏သီးသန့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲရာတွင်လည်း သင့်အား ကူညီနိုင်ပါသည်။
FMUSER နှင့် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်း၏ တောက်ပသောအနာဂတ်ကို ဆွေးနွေးကြပါစို့။
ကျွမ်းကျင် FM ရေဒီယိုစခန်းတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် နောက်ဆုံးလမ်းညွှန်
အသံလွှင့်စက်လုပ်ငန်းတွင် နှစ်အတန်ကြာ ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သည့် ဖောက်သည်များစွာသည် ကုန်ကျစရိတ်၊ အချိန်၊ အစရှိသည်တို့ကြားမှ ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံး FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနကို လိုချင်သည် သို့မဟုတ် ဘူတာတွင်ရှိပြီးသားအရာများကို အပ်ဒိတ်လုပ်လိုကြသော်လည်း များစွာသောအရေအတွက်များစွာရှိသေးသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ/လုပ်ငန်းသုံးအတွက် အောင်မြင်စွာအသုံးပြုရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနကို တည်ဆောက်ပုံနှင့် သိပ်မရင်းနှီးသော သုံးစွဲသူများ။
“ကိုးကားဖို့ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းစာရင်းရှိပါသလား” လို့ အမြဲမေးလေ့ရှိပြီး အဖြေကတော့ “ဟုတ်ပါတယ်” တဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသံလွှင့်စက်များမှ အင်တင်နာစနစ်များအထိ တန်ဖိုးနည်း ရေဒီယိုအသံလွှင့်ကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စက်ပစ္စည်းမွမ်းမံခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ခြင်းအတွက် "စျေးနှုန်းကဘာလဲ" သို့မဟုတ် "မည်ကဲ့သို့တည်ဆောက်ရမည်" ကဲ့သို့သော အလားတူမေးခွန်းများလည်း ရှိပါသည်။ ဤသည်မှာ FMUSER မှ ဖောက်သည်များထံမှ မကြာခဏရရှိလေ့ရှိသော မေးခွန်းများစာရင်းဖြစ်သည်-
သင်သည် FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန ကိရိယာများစာရင်းကို အပြည့်အစုံပေးပါသလား။
ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခု စတင်ရန် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကို ကျွန်ုပ်ဝယ်လိုသနည်း။
အကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲ။
ကျွမ်းကျင်သော ရေဒီယိုဌာနတစ်ခုတွင် အသံလွှင့်ကိရိယာ အမျိုးအစားမည်မျှရှိသနည်း။
ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနမှာ တွေ့ရှိရတဲ့ ကိရိယာက ဘာလဲ။
ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းစာရင်းကို ဘာကြောင့် လိုအပ်တာလဲ။
စျေးနှုန်းသက်သာသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းများကို သင်ရောင်းချရန် ကမ်းလှမ်းပါသလား။
ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန ကိရိယာအစုံအလင်က ဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်၏ FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်၏ လွှမ်းခြုံမှုကို မည်သို့ချဲ့ထွင်မည်နည်း။
အကောင်းဆုံး ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ ဘယ်မှာ ရှာရမည်နည်း။
အကောင်းဆုံး ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာန ကိရိယာတွေကို ဘယ်မှာ ဝယ်လို့ရမလဲ။
မတူညီသော အမှတ်တံဆိပ်များကြားတွင် အကောင်းဆုံး အသံလွှင့်ကိရိယာကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။
အသံလွှင့်ကိရိယာ ပက်ကေ့ဂျ်များကို စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။
အင်တင်နာစနစ်အတွက် သင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာ အဘယ်နည်း။
"ငါ့အိမ်နားက အကောင်းဆုံးဟိုတယ်" သို့မဟုတ် "အနီးဆုံး အားကစားရုံက ဘယ်မှာလဲ" ကဲ့သို့သော Google မေးခွန်းများတွင် အဖြေကို အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်သော်လည်း "အကောင်းဆုံး ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်ကိရိယာများ" သို့မဟုတ် "အကောင်းဆုံး ရေဒီယိုပစ္စည်းများ ပေးသွင်းသူ" ကဲ့သို့သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက် ၎င်းသည် ဖြစ်နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်များ ပါဝင်ရုံသာမက ရေဒီယို အတတ်ပညာဆိုင်ရာ အသိပညာ၏ ကျွမ်းကျင်မှုကို ထင်ဟပ်စေသောကြောင့် အဖြေများကို ရှာဖွေရန် ပိုမိုခက်ခဲစေပါသည်။ တံဆိပ်တပ်ထားသော FM အသံလွှင့်စက်များ၏ SNR တန်ဖိုး၊ သို့မဟုတ် FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာတစ်ခု၏ သီးခြားအမည်များ စသည်တို့ကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာများ၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့ကြောင့် သင်လုံးဝ ပဟေဠိဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် သင့်အား လုပ်နည်းနှင့်ပတ်သက်သော အတိုချုပ်ဆုံးဘာသာစကားဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခု တည်ဆောက်ရန်နှင့် သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည့် အဓိကအချက်များနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခု တည်ဆောက်ရာတွင် သင့်အား ကူညီရန်အတွက် အပိုပစ္စည်းလင့်ခ်အချို့ကို မျှဝေပါမည်။
2021 တွင် FM ထုတ်လွှင့်ခြင်းမှာ အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်နေသေးသနည်း။
ရေဒီယိုသုံးနေတုန်းလား။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးဒေသအချို့တွင် သင်နေထိုင်ပါက၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် ကွန်ပျူတာများကဲ့သို့သော စမတ်ကျသော terminal ပစ္စည်းများသည် နေ့စဉ်ဘဝ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီဖြစ်သော်လည်း မဖွံ့ဖြိုးသေးသော အချို့နေရာများတွင် FM ရေဒီယိုအသံဖမ်းစက်များကဲ့သို့သော အသံလွှင့်ကိရိယာများသည် အစားအစာကဲ့သို့ အရေးကြီးပါသည်။
ဒါဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် ဘာကြောင့်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရသလဲ၊ ဒါပေမယ့် အဖြေက တော်တော်လွယ်ပါတယ်- ခေတ်နောက်ကျတဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဒေသတွေမှာ၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း အကန့်အသတ်နဲ့ ရေဒီယိုဟာ များသောအားဖြင့် ဖျော်ဖြေရေးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ မဖွံ့ဖြိုးသေးသော နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများတွင် ရေဒီယိုအသုံးပြုခြင်းသည် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါသေးသည်။ ဥပမာ၊ ရေဒီယိုသည် ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးဖြင့် သတင်းအချက်အလတ်အဖြစ် အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းသည် ပရိသတ်အများဆုံးလက်ခံနိုင်သော ဖျော်ဖြေရေးနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ ရေဒီယိုသည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်မှုတွင် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ထိန်းချုပ်ထိရောက်မှုရှိသော အကောင်းဆုံး သတင်းအချက်အလတ် ထုတ်လွှင့်သည့် ချန်နယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေသခံမြို့ပြထုတ်လွှင့်သူများ သို့မဟုတ် ရပ်ရွာရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများသည် ဒေသတွင်းဘာသာစကားဖြင့် ကပ်ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ဒေသခံပြည်သူများအား COVID-19 "ဘယ်လိုနှင့် ဘာကြောင့်" ကိုလေ့လာနိုင်ကာ ဤဒေသခံအရှိဆုံး ယဉ်ကျေးမှုဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် နားထောင်သူများကို ယုံကြည်မှုတိုးစေပါသည်။
ရေဒီယိုသည် ကြိုးမဲ့အသံလွှင့်ခြင်း၏ သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ အချက်ပြထုတ်လွှင့်သည့်နေရာအဖြစ် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနဖြစ်သည်။ COVID-19 သည် ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း၊ ရပ်ရွာရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ မြို့နယ်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ဒရိုက်အင်ဘုရားကျောင်းများနှင့် ဒရိုက်အင်ပြဇာတ်ရုံများကဲ့သို့သော ထိတွေ့မှုမဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် မဖွံ့ဖြိုးသေးသောနိုင်ငံအများစုနှင့် ဒေသအများစုတွင် ဘေးကင်းသော ဖျော်ဖြေရေးပုံစံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ "ဝိုင်းဆုတောင်းရုံထက် ငါတို့လုပ်နိုင်တယ်။"
ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန မတည်ထောင်ခင် ဘာတွေသိထားသင့်လဲ။
အသံလွှင့်ဌာနတစ်ခု ထူထောင်ခြင်းသည် ထင်သလောက် မလွယ်ကူပါ။ ရေဒီယိုအစီအစဉ်များတွင် ထုတ်လွှင့်မည့်အရာနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ကုန်ကျစရိတ်များ မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လိုအပ်နိုင်သည်ကို သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် သင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနကို ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ပါက၊ သင်သည် ရေရှည်ဝင်ငွေလည်း များစွာရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ ပထမဆုံး ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန မတည်ဆောက်မီ၊ သင်သည် အောက်ပါ အဓိကအချက်များကို အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည်-
ဒေသတွင်း ရေဒီယို စီမံခန့်ခွဲရေးမှ ပြုလုပ်သော မူဝါဒများကို အကြိုကြည့်ရှုပါ။
pf ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန၏ အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်မှုအမျိုးအစားများကို လေ့လာခြင်းအပြင်၊ ပိုမိုအာရုံစိုက်ပြီး ဒေသဆိုင်ရာရေဒီယိုစီမံအုပ်ချုပ်မှု၏မူဝါဒများ (ဥပမာ FCC) ကို အချိန်မီရယူခြင်းဖြင့် ချိုးဖောက်မှုများအတွက် ကြီးလေးသောဒဏ်ငွေများကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးနိုင်ပြီး သင့်လျော်သောယှဉ်ပြိုင်မှုဗျူဟာများကို ရေးဆွဲရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများအပြားနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည့် ဥပမာ၊ အလုပ်သမားစရိတ်၊ ရေဒီယိုဌာန လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း ကုန်ကျစရိတ်၊ ရေနှင့် လျှပ်စစ်ကြေး၊ ထုတ်လွှင့်သည့် အကြောင်းအရာ တည်းဖြတ်စရိတ်၊ သို့မဟုတ် အချိန်ကုန်ကျစရိတ်၊ အားထုတ်စရိတ်စသည်ဖြင့်။
သင်တည်ဆောက်လိုသော အကောင်းဆုံးရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။
AM၊ FM၊ TV နှင့် IP တို့၏ အဓိက ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်မှု အမျိုးအစားများအတွက် ရေဒီယိုအသစ်လေးများအတွက် စိတ်ရှုပ်သွားနိုင်သည်။ သို့သော် ဤထုတ်လွှင့်မှုလေးမျိုးအတွက် လိုအပ်သော တည်ဆောက်မှုဘတ်ဂျက်နှင့် စက်ပစ္စည်းများတွင် ကြီးမားသော ခြားနားချက်ကို မြင်တွေ့ရန် လွယ်ကူပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ မည်သည့်အသံလွှင့်ဌာနအမျိုးအစားကို စတင်ရွေးချယ်ရာတွင် အစကတည်းက အရေးကြီးကြောင်း သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ- ၎င်းသည် သင့်လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလား။ ဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအမျိုးအစားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အမြဲမမေ့ပါနှင့်၊ ၎င်းသည် သင့်အသံလွှင့်ဌာန၏ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကို ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။
LPFM (အသေးစားနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်) ထုတ်လွှင့်ခြင်းအပါအဝင် HPFM ထုတ်လွှင့်ခြင်း (အကြီးစားနှင့် စီးပွားဖြစ်)၊ AM ထုတ်လွှင့်ခြင်း (အသုံးပြုဆဲ)၊ တီဗီထုတ်လွှင့်ခြင်း (အလွန်စျေးကြီးသည်) အပါအဝင် ဘုံရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုမှ ဦးဆောင်သည့် ဘုံရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်း
ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအသစ် - ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံလွှင့်ခြင်း (IP စတူဒီယို) က ဦးဆောင်ပြီး အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပေါ်ထွန်းလာသော streaming media ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့် နယ်ပယ်များမှ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများအတွက် သေချာသည်- ကျွမ်းကျင်သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုသို့ စက်ကိရိယာများ ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုများပြားခြင်းဖြင့် ဘူတာ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကို အမြဲတမ်းမြင့်မားစေသည်။
ဒါက မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဒေသတွေအတွက် အတူတူပဲလား။ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မဖွံ့ဖြိုးသေးသော နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများမှ ဖောက်သည်များစွာရှိသည်။ ပါဝါနိမ့် FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်၊ အသံလွှင့် အင်တာနာ အများအပြား၊ အင်တင်နာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ နှင့် စတူဒီယို ကိရိယာ အစုံအလင် စသည်တို့ ကဲ့သို့သော အခြေခံ ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာန ကိရိယာ များသည် ၎င်းတို့၏ ရေဒီယို အသံလွှင့်လုပ်ငန်း စတင်ခြင်းအတွက် တောင်းဆိုသမျှ ဖြစ်သည် ။ ဤဖောက်သည်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အချို့မြို့ငယ်များရှိ အသိုင်းအဝိုင်းများမှ လာကြပြီး ၎င်းတို့၏ ရေဒီယိုဌာနအနီးရှိ မြို့များ သို့မဟုတ် အိမ်နီးနားချင်းအသိုင်းအဝိုင်းများမှ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စတင်ခြင်းအစီအစဉ်တွင် ရေးသားထားသည့် ပမာဏထက် အဆမတန်နည်းသည့် ရေဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် ပြည်တွင်းရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်းမှ သိသိသာသာကျော်ကြားလာခဲ့သည်။
ဒါကြောင့် ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနရဲ့ ကျွမ်းကျင်အဆင့်ဟာ ပြည်တွင်းနားဆင်သူတွေအတွက်တော့ ဒီလောက်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါဆို အများကြီး ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ - ထုတ်လွှင့်မည့် ရေဒီယိုအစီအစဉ်များရှိပြီး လူများသည် ရေဒီယိုလက်ခံစက်မှတစ်ဆင့် နားထောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများမှ ဖောက်သည်အချို့သည် ဘတ်ဂျက်ပိုမြင့်ပြီး အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ရယူကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန turnkey ဖြေရှင်းချက်များကို နှစ်သက်ကြပြီး အချို့သောမြို့ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများကဲ့သို့ ကြီးမားသောရေဒီယိုစခန်းများတွင် ပါဝင်သော အသံလွှင့်ကိရိယာများကို အသုံးချနိုင်သည်။
သင့်တွင် ဘတ်ဂျက်နည်းပြီး မိုင်အနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပါက၊ LPFM ရေဒီယို အသံလွှင့်ကိရိယာသည် သင့်လိုအပ်ချက်များကို ကောင်းစွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ သင့်တွင် လုံလောက်သောဘတ်ဂျက်ရှိပြီး မိုင်ဆယ်နှင့်ချီ၍လွှမ်းခြုံမှုကို တိုးမြှင့်လိုပါက HPFM ရေဒီယိုလိုင်းများသည် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်တွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အလုံးစုံနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသည်နှင့် အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သောအဆင့်များကို မလုပ်ဆောင်ပါသနည်း။ တရားဝင်ရေဒီယို စီမံခန့်ခွဲရေးမှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းသည် ရေဒီယိုစခန်းတည်ဆောက်မှုတွင် အရေးကြီးဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာ မတူညီသောရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများနှင့် ၎င်းတို့၏လိုင်စင်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကွဲပြားမှုများကို နားလည်ရန်နှင့် လိုင်စင်တစ်ခု တရားဝင်မလျှောက်ထားမီ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ရန် - FM တီးဝိုင်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းသည် ကြာရှည်ပြီး ခက်ခဲမည်ဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း LPFM နှင့် HPFM သည် ရိုးရာထုတ်လွှင့်မှု၏ ပင်မထုတ်လွှင့်မှုအမျိုးအစားနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုခုဖြစ်သည့် LPFM သို့မဟုတ် HPFM ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန၏အမြတ်အစွန်းကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်ဆိုသည့် ပြဿနာကို မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက် LPFM ဘူတာကို သင်ရွေးချယ်ပါက၊ သင့်ပရိသတ်ထံ အခကြေးငွေပေးချေသောကြော်ငြာပုံစံကိုမဆို ပေးပို့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ (LPFM သည် အကျိုးအမြတ်မယူသော ကုန်းမြေထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်သည်)။ သို့သော် Low power FM ရေဒီယိုလိုင်းသည် ဂီတ၊ သတင်း၊ ပြည်သူ့ရေးရာ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသော အသံပရိုဂရမ်များကို ထုတ်လွှင့်နေပါသည်။
အခကြေးငွေပေးသော ကြော်ငြာတွင် သင်ပါဝင်၍မရသော်လည်း၊ ကော်ပိုရိတ်အလှူငွေများကို လက်ခံနိုင်ပြီး ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်း အဆိုပါလှူဒါန်းမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြနိုင်စေမည့်အစား ကူးယူရေးတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ LPFM ရေဒီယို၏ ထုတ်လွှင့်မှုလွှမ်းခြုံမှုသည် အလွန်အကန့်အသတ်ရှိပြီး အများအားဖြင့် လူထုထုတ်လွှင့်မှုပုံစံဖြင့် ပေါ်လာသောကြောင့်၊ ထို့ကြောင့်၊ တိကျသောအမြတ်အစွန်းရရှိမှုဗျူဟာသည် သင့်နားဆင်သူ၏တည်နေရာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် HPFM ရေဒီယိုလိုင်းကို ရွေးချယ်ပါက၊ အခပေး ကြော်ငြာများ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် စိတ်ပူစရာ မလိုပါ။ သို့သော်၊ HPFM ရေဒီယိုလိုင်းများအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် ပိုမိုခက်ခဲပြီး လျှောက်ထားမှုစရိတ်စက ပိုမိုများပြားသည်။
သင့်အသံလွှင့်ဌာန၏ အတွင်းရေးကိစ္စများကို မည်သို့စီစဉ်မည်နည်း။
အကယ်၍ သင်သည် သင်၏ ရေဒီယိုလိုင်စင် လျှောက်လွှာကို ဒေသတွင်း ရေဒီယို စီမံခန့်ခွဲရေးထံ တင်သွင်းခဲ့ပါက၊ အတည်ပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းရုံမှတပါး အခြားဘာများ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း။ ဒီအတွင်းရေးကိစ္စတွေကို ချုပ်ကိုင်လိုက်ကြရအောင်။ FMUSER အတွက် ရေဒီယိုဌာနသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ဤ "ကုမ္ပဏီ" ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူအနေဖြင့် သင်သည် မနက်ဖြန်တွင် ထုတ်လွှင့်မည့်အရာ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်၏ဘူတာရုံကို လူကြိုက်များအောင် ပြုလုပ်ပုံကဲ့သို့သော အသေးအမွှားကိစ္စများစွာကို သင်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါတို့သည် အချို့သော ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ထားသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ၏ ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်အရ FMUSER မှ အကျဉ်းချုံးထားသော လက်တွေ့ကျသော စည်းမျဉ်းခြောက်ခုဖြစ်သည်-
တရားဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး ကြီးလေးသောပြစ်ဒဏ်များကို ရှောင်ရှားပါ။
အထူးသဖြင့် သင်သည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် မရေမတွက်နိုင်သော စွမ်းအင်အတွက် ဒေါ်လာသောင်းနှင့်ချီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်အခါတွင် ဒေသတွင်း ရေဒီယိုအုပ်ချုပ်ရေးမှ တရားမ၀င်လည်ပတ်မှုအတွက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်ပေးခြင်းကို မည်သူမျှ မခံချင်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်၊ လိုအပ်သည့် သို့မဟုတ် တင်ပြရန် လိုအပ်မည့် စာရွက်စာတန်းများကို ပြင်ဆင်ပြီး ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန၏ လည်ပတ်မှုကို မထိခိုက်စေရန် ပကတိအခြေအနေအရ လျှောက်လွှာအချက်အလက်ကို ဖြည့်သွင်းရန် အမြဲသတိရပါ။
အမြဲတမ်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါ။
အသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုစတင်တည်ထောင်ခြင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်သည် ရံပုံငွေများစွာလိုအပ်သည် (အရာရာတိုင်းကို ထိပ်တန်းအဆင့်ဖြစ်လိုလျှင်) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံလွှင့်ကိရိယာများဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်၊ ရေဒီယိုစတူဒီယိုနေရာငှားရမ်းခ၊ ဂိုဒေါင်ငှားရမ်းခ၊ အသုံးဝင်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ လစာစရိတ်များအပါအဝင်၊ စသည်ဖြင့် ဤအချက်များအား အသေအချာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်၊ အကယ်၍ အဆိုပါအချက်များ ပျောက်ဆုံးနေပါက သင်သည် ကြီးစွာသော ဒုက္ခဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ ဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်များကို ရှာဖွေခြင်းသည် အထူးသဖြင့် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန တည်ဆောက်မှု၏ ကနဦးအဆင့်တွင် အားလုံးထက် သာလွန်နေပါသည်။ FM ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ရှိပြီးသားနေရာနှင့် စက်ကိရိယာများ (ရေဒီယိုမျှော်စင်နှင့် စတူဒီယိုကဲ့သို့သော) တို့ကိုလည်း ငှားရမ်းရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သောဗျူဟာဖြစ်သည်၊ သို့သော် ကုန်ကျစရိတ်များလွန်းသောကြောင့် အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော ရေဒီယိုလိုင်းအတွက် မထောက်ခံပါ။ ကောင်းပြီ၊ ရွေးချယ်မှုသည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်များကို ပေါင်းစပ်ပြီး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို တည်ဆောက်ပါ။
အသံလွှင့်စက်များ ဝယ်ယူခြင်းအပြင် ၎င်းတို့ကို နေရာချထားရန် လိုအပ်ပြီး စက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုရန် တစ်စုံတစ်ဦးကို ရှာဖွေပါ။ တစ်ယောက်တည်း လုပ်ချင်တာလား။ ဒါက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ်။ အသံလွှင့်စက်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ပညာရှင်တစ်ဦး လိုအပ်ပါမည်။ ရေဒီယိုအစီအစဉ်များကို တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် ကွင်းဆင်းလုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသော ရေဒီယိုကျွမ်းကျင်သူများစွာ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏စတင်မှုအချိန်ဇယားတွင် ရေဒီယိုအသံလွှင့်စွမ်းရည်အချို့ကို ရယူလိုက်ပါ။
ဘူတာရုံတည်ဆောက်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဒေသတွင်းရေဒီယိုမူဝါဒများမှလွဲ၍ အခြားဘာများသိလိုပါသနည်း။ စစ်မှန်သော အသံလွှင့်ဌာနကို မည်သို့ဖန်တီးရမည်ကို သင်လည်း ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်ပေမည်။ သင်တည်ဆောက်မည့် အသေးစား၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော်လည်း အမြတ်အစွန်းနည်းသော LPFM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံ သို့မဟုတ် ကြီးမားပြီး အကျိုးအမြတ်များသော စီးပွားဖြစ်/ HPFM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန သို့မဟုတ် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ အခြားရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအမျိုးအစားများ ရှိပါသလား။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်များသည် သင့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေပါသည်။ လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း သင့်ရေဒီယိုအစီအစဉ်အမျိုးအစားများပေါ်တွင်လည်း သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများလည်း ပြုလုပ်ပါသည်။
သင့်ရေဒီယိုစခန်းအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ မြေပြင်အနေအထား၊ ပြန့်ပြူးသော သို့မဟုတ် တောင်ကုန်းရှိ၊ ပြန့်ပြူးသောမြေပြင်သည် ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသံလွှင့်အင်တင်နာကို လွှမ်းခြုံနိုင်စေမည့် နောက်ထပ်အချက်အချို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ အပူပိုင်းဒေသ ရေဒီယိုစခန်း ဆောက်မှာလား။ ဟုတ်ပါက၊ စိုထိုင်းဆနှင့် အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကဲ့သို့သော ရာသီဥတုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုသည်၊ ဤအချက်များသည် သင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတည်ဆောက်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်လာစေသည်၊ အထူးသဖြင့် အကောင်းဆုံးရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်ကိရိယာများကို ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ဤအချက်များက အနုတ်လက္ခဏာများဆောင်ကြဉ်းလာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ရေဒီယိုအစီအစဉ်များမှ ပိုမိုကောင်းမွန်သော သုံးသပ်ချက်ကို မည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း။ ရေဒီယိုစခန်းတည်ဆောက်နေစဉ်အတွင်း ပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ တစ်ယောက်တည်း တိုက်ရတာ ပညာမတတ်ဘူး၊ ဒီအချိန်မှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတည်ဆောက်မှုတွင် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် FMUSER သည် ဘတ်ဂျက်တိုင်းတွင် ရေဒီယိုဝယ်ယူသူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန turnkey ဖြေရှင်းချက်များနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံအစီအစဥ်ရေးဆွဲခြင်းမှသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတည်ဆောက်မှုမပြီးမီနှင့် အပြီးလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော အဆင့်ငယ်တစ်ခုစီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအထိ အွန်လိုင်းအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပံ့ပိုးကူညီမှုလည်း ရရှိနိုင်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများနှင့် စတူဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာအစုံအလင်ကို ရှာဖွေနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ကျွမ်းကျင်သူများထံ ဆက်သွယ်ပြီး သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ဘတ်ဂျက်များကို အသိပေးပါ၊ FMUSER Broadcast မှ နောက်ဆုံးပေါ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် FM ရေဒီယိုလိုင်းတပ်ဆင်မှုပရောဂျက်ကို ရယူလိုက်ပါ။ နောက်ထပ်လေ့လာရန်
ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်းအတွက် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။
ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် အသံပရိုဂရမ်များကို ထုတ်လွှင့်လိုပါက အကောင်းဆုံးရေဒီယို အသံလွှင့်ကိရိယာများ ရှိရန် လိုအပ်ပါသေးသည်။ ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တို့ကို မမေ့ပါနှင့်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ရေဒီယိုခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် အသံလွှင့်တီးဝိုင်း လိုအပ်ချက်ကဲ့သို့သော ဒေသန္တရရေဒီယို စီမံခန့်ခွဲရေးမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် တရားဝင် ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြေခံ LPFM ရေဒီယိုလိုင်းတစ်ခုသည် စီးပွားဖြစ် FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနထက် အမှတ်တံဆိပ်ကြီးကြီးမားမား ထုတ်လွှင့်မှုကိရိယာ အနည်းငယ် လိုအပ်နိုင်သည် (ကုန်ကျစရိတ်ပိုများသောကြောင့်)၊ သို့သော်ငြားလည်း၊ ပြီးပြည့်စုံသော အသံလွှင့်ကိရိယာများအတွက် စစ်ဆေးရန်စာရင်းကို ဖန်တီးခြင်းသည်လည်း ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအမျိုးအစားအတွက် များစွာအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးသည်။ AM နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ရေဒီယို အသံလွှင့်ခြင်းအတွက် အလုပ်လုပ်သည်။
FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်းအတွက်၊ ပြီးပြည့်စုံသော FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် စက်ပစ္စည်းစစ်ဆေးမှုစာရင်းတွင် အခြေခံအသံလွှင့်ကိရိယာသုံးမျိုး ပါဝင်သည်-
FM အချက်ပြမှုများ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် စက်ပစ္စည်း - နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများထံသို့ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် ရေဒီယိုအင်ဂျင်နီယာအခန်းတွင် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
အသံလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် စက်ပစ္စည်း - ရေဒီယိုစတူဒီယိုတွင် အများစုသည် ရှေ့ဆုံး အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာများအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။
အသံထည့်သွင်းခြင်းအတွက် စက်ပစ္စည်း - အိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်များမှ ပေးပို့သော ရေဒီယိုပရိုဂရမ်များ၏ အသံအချက်ပြမှုများကို ထည့်သွင်းရန်အတွက် ရေဒီယိုစတူဒီယိုတွင် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
အသုံးများသော FM Transmitting Equipment Checklist ပါဝင်ပါသည်။
Studio transmitter လင့် စက်ပစ္စည်း - ဒစ်ဂျစ်တယ် STL စနစ်တွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် ကုဒ်နံပါတ်နှင့် ဒီကုဒ်ကိရိယာများ၊ ပါရာဘော်လစ်အင်တင်နာများ၊ ကွန်ရက်ခလုတ်များနှင့် မီးစက်၊ အသံနှင့် ဗီဒီယိုထည့်သွင်းမှုလိုင်းများ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် STL တွင် STL အင်တင်နာ၊ STL အသံလွှင့်ကိရိယာနှင့် STL လက်ခံကိရိယာတို့ ပါဝင်ပါသည်။ STL စနစ်ကို သင့်စတူဒီယိုများကို အသံလွှင့်စက်ဆိုက်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှုအရည်အသွေးကို သေချာစေသည်။
FM အသံလွှင့်စက် - FM အချက်ပြမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ထုတ်လွှင့်သော အင်တာနာများသို့ ပေးပို့ရန်အတွက် အခြေခံ FM ရေဒီယိုစခန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် အဓိကပစ္စည်းများ
Antenna စနစ် ပက်ကေ့ချ် - အင်တာနာ ဖိဒ်လိုင်းများ၊ coaxial ကေဘယ်များ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါ၀င်သည်၊ အရေးအကြီးဆုံး အပိုင်းများမှာ ထုတ်လွှင့်သည့် အင်တင်နာ ခင်းကျင်းများ ဖြစ်သည်၊ ပိုမိုထိရောက်သော ထုတ်လွှင့်မှုသို့ ရောက်ရှိစေရန် ထပ်လောင်း အင်တင်နာ အမြတ်များ ပါရှိသည်။
အင်တင်နာအတွက် FM Combiner - များစွာသော အင်တင်နာများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုနှင့် အသံလွှင့်တာဝါ၏ နေရာအကန့်အသတ်ကြောင့် FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် ပါဝါအသံချဲ့စက်မှ အထွက်ပါဝါကို ထုတ်ယူပြီး FM အင်တင်နာ ခင်းကျင်းတစ်ခုတွင် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် FM ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Antenna Waveguide ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စက် - ရေဒီယိုလေကို ကွန်ပရက်ဆာဟုလည်း လူသိများသော၊ ၎င်းသည် တောင့်တင်းသော ဂီယာလိုင်းများသို့ ခြောက်သွေ့ပြီး ဖိသိပ်ထားသော လေကို ပေးဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အရေးကြီးသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကြီးမားသော ရေဒီယိုစခန်းများတွင် အများအားဖြင့် မြင်တွေ့နေရပါသည်။
FM Transmitter အတွက် Power Amplifier - FM Exciter မှ အချက်ပြမှုများကို ဖမ်းယူပြီး သင်တရားဝင်အသုံးပြုထားသည့် ပါဝါအထိ ချဲ့ထွင်ရန် အသုံးပြုသည်။
FM စတီရီယိုမီးစက် - ကြိုတင်အလေးပေးမှု နှင့် low-pass filtering ဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ FM stereo generator ကို multipath ကြောင့်ဖြစ်ရသည့် receiver ရောနှောခြင်း၏ လွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ပြီးပြည့်စုံသော AES MPX composite baseband ကို exciter သို့ လွှဲပြောင်းရန်အတွက် ပြင်ပ FM အသံလုပ်ဆောင်ခြင်းစနစ်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ အနှစ်ချုပ်ရလျှင် FM စတီရီယိုမီးစက်သည် အချက်ပြမှုများ (အသံ) ကို လက်ခံရရှိပြီး ၎င်းတို့အား FM ဘေ့စ်ဘန်းဖော်မတ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ပြောင်းပေးသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။
ပေါင်းစပ်စတီရီယို အသံပြောင်းကိရိယာ - FM စတီရီယို ဂျင်နရေတာများအကြား စတီရီယိုအသံပြောင်းရန် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများကို ကူးပြောင်းခြင်း (အများအပြားရှိလျှင်)
FM စိတ်လှုပ်ရှား - FM Stereo Generator သို့မဟုတ် Composite Stereo Audio Switcher မှ FM Stereo Baseband ၏အသံအချက်ပြမှုများကိုဖမ်းယူရန်အသုံးပြုသည်
အသံလွှင့်အင်တင်နာခလုတ်များ - ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်နှင့် လက်ခံကိရိယာကဲ့သို့သော အခြားထုတ်လွှင့်ထုတ်လွှင့်သည့် ထုတ်လွှင့်ကိရိယာများနှင့် အသုံးချသည့် ထုတ်လွှင့်သည့် အင်တာနာများအကြား ကူးပြောင်းရန် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ။
RF အဝေးထိန်းခလုတ် - အသံလွှင့်ကိရိယာသို့ RF အဝေးထိန်းညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်လွှတ်ရန် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ကြိုးမဲ့ကိရိယာ (စက်ပစ္စည်းကို တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်ရန် မလိုအပ်ပါ) ထို့အပြင်၊ များစွာသော ထုတ်လွှင့်သည့် အင်တင်နာစနစ်များတွင်၊ ၎င်းသည် RF ထုတ်လွှင့်သည့်စနစ်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး သတိပေးချက်များကို ထုတ်ပေးသည့်အခါ၊ စနစ်မှားသွားပါသည်။
Radio Rack Room တွင် "ရှိသင့်သော" အသံလွှင့်စက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ရေဒီယို အသံလွှင့်စတူဒီယိုတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ပါဝင်သည်။
အသံအကြောင်းအရာ လုပ်ဆောင်ခြင်းဆော့ဖ်ဝဲလ် (ဥပမာ- အသံပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် ပြင်ပမှ အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် အဖွင့်ဆော့ဖ်ဝဲ- ပေါ့တ်ကာစ်များဖွင့်ခြင်း၊ အသံအချက်ပြမှုများ ရောစပ်ခြင်း၊ အသံညီမျှခြင်းနှင့် အသံချုံ့ခြင်း စသည်ဖြင့်)
အလိုအလျောက်ထုတ်လွှင့်မှုအချိန်ဇယားဆော့ဖ်ဝဲ (24/7 တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အသုံးချနိုင်သည်)
အသံလွှင့်ခြင်းဆော့ဖ်ဝဲ (သင်အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိုပါက သို့မဟုတ် အစီအစဉ်အားလုံးကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရန်)
အသုံးများသော ရေဒီယို အသံလွှင့်စတူဒီယို ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။
အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ကိရိယာ
USB Mixer Console
ပြင်ပ USB အသံကတ် (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်အသံသွင်းခြင်းများ ပြုလုပ်လိုပါက)
ခလုတ်အကန့် (GPIO-ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက် အဝင်/အထွက်)
မိုက်ခရိုဖုန်း Stand (Mic Arms)
Active Speakers Monitors
Field Monitors အနီး
စပီကာများ(Cue/Preview Speaker & Studio Monitor Speakers)
Radio Intercommunication Device - ရေဒီယိုအင်တာကွန် သို့မဟုတ် ရေဒီယိုကြားခံဖုန်းဟုလည်းသိကြပြီး၊ ၎င်းသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနရှိ တယ်လီဖုန်းကွန်ရက်စနစ်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုသည့် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Live call Equipment - ဖုန်း သို့မဟုတ် GSM ဖြင့် တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုသည်၊ ၎င်းကို Phone Talkback စနစ်ဟုလည်း ခေါ်သည် ။
အသံအရန်သိမ်းဆည်းမှုများ (CD ပလေယာများ၊ DAT စက်များ၊ Mini Disk ပလေယာများ၊ နှင့် Turn Tables စသည်ဖြင့်)
အသံထည့်သွင်းခြင်း စက်ပစ္စည်း (မိုက်ခရိုဖုန်းများ၊ နားကြပ်များနှင့် Pop Filters စသည်တို့)
ကွန်ပျူတာ - တိကျသောထိန်းချုပ်မှုညွှန်ကြားချက်များပေးပို့ရန်နှင့် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနကိရိယာများ၏ တည်ငြိမ်ပြီး ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန်အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်၊ မကြာခဏ FM ရေဒီယိုလိုင်းတစ်ခုတွင် rack-mounted server ပုံစံဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။
အသံသိုလှောင်မှုအတွက် ဟာ့ဒ်ဒစ်ဒရိုက်များ - ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများတွင် အမျိုးအစားခွဲရန် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည့် သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့် အသံဖိုင်များ၊ အကြံပြုချက်များ- သင့်ဒရိုက်ကို မှန်အရန်ထားရှိရန် အမြဲသတိရပါ။ Mirror Backup သည် အဆင်ပြေဆုံးနှင့် အမြန်ဆန်ဆုံးသော အရန်သိမ်းနည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်မှ ဖိုင်တစ်ခုကို ဖျက်လိုက်သောအခါတွင်၊ ဖိုင်သည် နောက်ဆုံးတွင် မှန်အရန်သိမ်းခြင်းတွင် ပျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမျှ ချုံ့ရန်မလိုအပ်ပါ (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် mirror backup သည် အမှန်တကယ်တွင် ကွန်ပျူတာရှိ အကြောင်းအရာအားလုံး၏ တိကျသောမိတ္တူတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်)
KVM တိုးချဲ့ - KVM ချဲ့ထွင်ခြင်းကို KVM Switches၊ PC Switches၊ Server Switches နှင့် CPU Switches များဟု လူသိများပြီး KVM သည် ကီးဘုတ်၊ ဗီဒီယိုနှင့် မောက်စ်တို့အတွက် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စက်ဝိုင်းအတွင်း ထည့်သွင်းသည့် အချက်ပြမှုများကို ဖမ်းယူသည့်နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး အသုံးပြုသူများအား ကီးဘုတ်နှင့် မောက်စ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ကွန်ပျူတာ2ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ KVM extensioner သည် end-user မှ ကီးဘုတ်များနှင့် မော်နီတာများစွာကို တစ်ပြိုင်နက်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် စားပွဲနေရာမလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောရှုပ်ထွေးမှုများကို လျှော့ချပေးသည်။
အသံရောနှောအင်ဂျင် - စနစ်တစ်ခုလုံးရှိ ညွှန်ကြားချက်များအားလုံးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် အသုံးပြုသည့် အသံပေါင်းစပ်ကိရိယာ (IP-based အရံအတားများ အားလုံးအတွက် ဆက်သွယ်ရေးစင်တာ)။ အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားများတွင် IP၊ အသံ၊ ပါဝါပလပ်အင်များနှင့် လမ်းကြောင်းတင်ခြင်းနှင့် ရောနှောခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။
အသံ Router - သီးခြားစက်ပစ္စည်းများမှ အသံထည့်သွင်းမှုကို ပေးဆောင်ပြီး ၎င်းတို့ကို မှန်ကန်သော အသံထွက်ပေါက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် အသံလက်ခံခြင်းနှင့် ကူးပြောင်းသည့်ကိရိယာ။
အသံ I/O Node - Analog သို့မဟုတ် AES အချက်ပြမှုများကို IP packet များသို့ လွှဲပြောင်းရန် အသွားအပြန် ခရီးတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခု၊ ၎င်းသည် သင့်အား ဝဘ်အခြေခံ အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုမှ လမ်းကြောင်းတင်ခြင်းအား ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် အထွက်များစွာ (node ​​အများစုတွင် ပါရှိသည်)။
Studiohub - ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းသည် RJ-45 အသံချိတ်ဆက်မှုများ သို့မဟုတ် RJ45 မှတဆင့် analog နှင့် AES အသံချိတ်ဆက်မှုအတွက် Studiohub ဝါယာကြိုးစံနှုန်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ PS- RJ45 ရှိ "RJ" သည် Bell System ၏ USOC (Universal Service Ordering Code) အစီအစဉ်၏ တယ်လီဖုန်းအင်တာဖေ့စ်များအတွက် 1970 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် မူလတွေ့ရှိခဲ့သော စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည့် Registered Jack ၏ အတိုကောက်ဖြစ်သည်။
Network Patch Bay - ဒေသတွင်းဧရိယာကွန်ရက်အတွင်းရှိ ကွန်ရက်ကွန်ပျူတာများကို အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် အင်တာနက် သို့မဟုတ် အခြားကျယ်ပြန့်သောကွန်ရက်များ (WAN) အပါအဝင် ပြင်ပလိုင်းများသို့ ချိတ်ဆက်ရန် ကြိုးများကို အသုံးပြုသည့် ဝါယာကြိုးများကိရိယာ။ static switchboard အဖြစ်အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းအနေဖြင့်၊ Network Patch Panel ကို fiber optic ကေဘယ်လ်ကြိုးများ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပြီး စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် Network Patch Panel နှင့် Cat6 ကြိုးများမှတဆင့် စက်အားလုံးကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ patch panel သည် ကွန်ရက်အတွက် ရိုးရှင်းပြီး တိကျသော ဝိုင်ယာကြိုးစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး ၎င်း၏ ကြီးစွာသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ထိန်းသိမ်းမှုအခက်အခဲကို လျော့နည်းစေသည်- အကြောင်းအရာကို ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည့်အခါတွင် ပျက်ကွက်သည့်အခါ၊ ပြန်လည်ပတ်ရန် သို့မဟုတ် ရွှေ့ရန် မလိုအပ်ပါ။ စက်ကိရိယာများနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများကိုလည်း အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
audio Cable ကို - အသံအချက်ပြမှုများ (အင်နာလော့/ဒစ်ဂျစ်တယ်) ကို စပီကာကဲ့သို့ လက်ခံသည့်အဆုံးသို့ လွှဲပြောင်းရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် အသံချိတ်ဆက်လိုင်းတစ်ခု။ အသုံးအများဆုံးကေဘယ်များသည် jack၊ cinch နှင့် coaxial ဟုခေါ်သော analog RCA ကေဘယ်များဖြစ်သည် (အမျိုးအစားများအစား ၎င်းတို့၏တည်ဆောက်မှု သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုများကို အခြေခံ၍ မူလအမည်ပေးသည်)
လာကြတယ်-down Block (ဝါယာကြိုးများကို အပေါက်တစ်ခုစီတွင် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကေဘယ်ကြိုးများကို ဖြတ်တောက်သည့် ကိရိယာတစ်ခု၊ ၎င်းသည် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးများတွင် အဖြစ်များသော်လည်း ၎င်းကို အသံလွှင့်ဌာနအဟောင်းများတွင်လည်း အများအပြားတွေ့ရှိရပါသည်။)
ကွန်ယက်ပြောင်းလဲခြင်း - ကွန်ပျူတာများကဲ့သို့သော ကွန်ရက်အခြေပြု စက်ပစ္စည်းအများအပြားနှင့် ကြိုးမဲ့စာရင်းခြေရာခံကိရိယာများကဲ့သို့သော အရာများ၏အင်တာနက် (IoT) စက်ပစ္စည်းအများအပြား၏ ချိတ်ဆက်မှုအတွက် အသုံးပြုသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ဟာ့ဒ်ဝဲအခြေခံစက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အတုအယောင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲ)၊ . ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုသည် ကွန်ရက်ရောက်တာတစ်ခုနှင့် ကွဲပြားစွာအလုပ်လုပ်သည်- ၎င်းသည် ချိတ်ဆက်ထားသောစက်ပစ္စည်းများအကြား သတင်းအချက်အလက်မျှဝေရန် အဝေးပြေးလမ်းကို ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ကွန်ရက်များထံပေးပို့မည့်အစား စက်ပစ္စည်းများအကြား ဒေတာပက်ကေ့ချ်များကို ပေးပို့သည်။ ထို့အပြင်၊ ကွန်ရက်ခလုတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းသို့ ဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထွက်ခြင်းတို့ကို စီမံခန့်ခွဲစေပြီး လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို ပုံပျက်မသွားစေခြင်း စသည်တို့ကို ကူညီပေးပါသည်။
ကွန်ယက်လမ်းကြောင်း (သို့မဟုတ် ပုံသေတံခါးပေါက်) - အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်အတွက် အဓိကအသုံးပြုသည့် ကူးပြောင်းစက်- ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များပေါ်ရှိ ဒေတာပက်ကေ့ခ်ျများကို မိုဒမ်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ကေဘယ်ကြိုးဝါယာကြိုးများမှတစ်ဆင့် ကွန်ပြူတာကွန်ရက်များသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ပေးပို့လက်ခံရန်၊ ၎င်းကို ချိတ်ဆက်ကွန်ရက်များ သို့မဟုတ် VPN ချိတ်ဆက်မှုများအတွက်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ ကွန်ရက်ရောက်တာတစ်ခုသည် Network Switch နှင့် ကွဲပြားစွာအလုပ်လုပ်သည်- ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား စက်များအကြား ပေးပို့ခြင်းအစား ကွန်ရက်များသို့ ဒေတာပက်ကေ့ဂျ်များ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များအကြား သတင်းအချက်အလက်မျှဝေမှု (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး) အတွက် အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ရာတွင် ကူညီပေးသည့် "မှော်ခရီးသွားခြင်း" အတွက် အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ပေးသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို IT ဟက်ကာ၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းစသည်တို့မှ လုံခြုံစေရန်၊
On-Air Broadcast Audio ပရိုဆက်ဆာ - ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုရှိ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတွင် အသုံးပြုထားသည့် multi-band အသံစီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့်ကိရိယာအပိုင်းအစ၊ အများစုမှာ ကလစ်ပါ (ဘေ့စ်ညှပ်နှင့် မာစတာညှပ်ပါ) နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် MPX စတီရီယိုဂျင်နရေတာတို့ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လွှင့်မှု၏ အထွတ်အထိပ်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် အသုံးပြုသည်။ FM အသံပရိုဆက်ဆာကို အသံထည့်သွင်းမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုပါသည်၊ ဥပမာ၊ လေသံကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် စီးပွားရေးရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် အထူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်အသံကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
RDS encoder - FM ရေဒီယိုအချက်ပြမှုများ၊ အမှတ်တံဆိပ်အချက်အလက်၊ အသံပရိုဂရမ်အချက်အလက်နှင့် ဘူတာရုံ၏ အခြားအချက်အလက်များကဲ့သို့ ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများ (ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်အလက်များ) ကို ထုတ်လွှင့်နိုင်သော စက်ပစ္စည်းတစ်ခု။ RDS သည် European Broadcasting Union (EBU) ဆက်သွယ်ရေးစံနှုန်းကို ရည်ညွှန်းသည့် ရေဒီယိုဒေတာစနစ်မှ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး၊ ဤစံနှုန်းသည် FM ရေဒီယိုလိုင်းတစ်ခု၏ FM ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသော အချက်ပြအရည်အသွေးနှင့် ရောင်စဉ်တန်း သန့်စင်မှုကို ဖန်တီးပေးကာ အပြည့်အဝ ဖန်တီးပေးပါသည်။ ရေဒီယိုအော်ပရေတာများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်။
တယ်လီဖုန်း Hybrid ပစ္စည်းများ - ဖုန်းခေါ်ဆိုသူနှင့် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကြား စကားပြောဆိုမှုကို မှတ်တမ်းတင်ရန် သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ရန် သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုသူ သို့မဟုတ် သတင်းထောက်များကို ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် တယ်လီဖုန်းပေါင်းစပ်မှုကို အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ တယ်လီဖုန်းပေါင်းစပ်ပစ္စည်းကိရိယာအား ထုတ်လွှင့်သော တယ်လီဖုန်းပေါင်းစပ် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းလက်ကျန်ယူနစ် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းခက်ရင်းတစ်ခုအဖြစ် လူသိများပြီး ပုံမှန်တယ်လီဖုန်းလိုင်းတစ်ခုနှင့် ရောစပ်ကွန်ဆိုးလ်ကြားရှိ မျက်နှာပြင်ကို ပံ့ပိုးပေးကာ နှစ်ဝါယာကြိုးနှင့် လေးဝါယာကြိုးနှစ်သွယ်ရှိသော အသံလမ်းကြောင်းများကြားသို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ Telephone Hybrid စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် တယ်လီဖုန်းနှင့် ရောစပ်ကွန်ဆိုးလ်ကြားတွင် လွယ်ကူစွာ လှည့်ပတ်မှုကို သိရှိလာသောကြောင့် ၎င်းသည် တည်နေရာတွင် အသုံးပြုရန် အလွန်သင့်လျော်သည့်အပြင် ဖုန်းခေါ်ဆိုခသာမက VoIP တယ်လီဖုန်းနှင့် ရိုးရာ analog ဖုန်းများ၏ အန္တရာယ်ကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံးအချိန်၌ပင် ထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖန်တီးပါ။
PABE (Private Automatic Branch Exchange) - အိမ်တွင်းနှင့် ပြင်ပခေါ်ဆိုမှုအတွက် လိုင်းပေါင်းများစွာ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် တည်ဆောက်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံခန့်ခွဲသည့် အလိုအလျောက်ဖုန်းပြောင်းသည့်စနစ်။ PABE သည် ပုဂ္ဂလိက အလိုအလျောက် ဘဏ်ခွဲလဲလှယ်ခြင်းမှ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် လိုအပ်သော သီးသန့်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ PABE သည် အများသူငှာ တယ်လီဖုန်းကွန်ရက်များ အသုံးပြုခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သောကြောင့် အတွင်းပိုင်းခေါ်ဆိုမှုများကို အများသူငှာ တယ်လီဖုန်းလိုင်းအနည်းငယ်ဖြင့်သာ အခမဲ့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ PABE သည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွင်းရှိ အတွင်းပိုင်းဆက်သွယ်မှုကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ခလုတ်အနည်းငယ်သာနှိပ်ထားခြင်းဖြင့် အတွင်းပိုင်းမှ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရိုးရှင်းစွာခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
FM Off-Air လက်ခံကိရိယာ - ရေဒီယိုအစီအစဉ်အတွင်း အချက်ပြမှုကို စောင့်ကြည့်ရန် သို့မဟုတ် ချိန်ညှိနိုင်သော analog နှင့် AES ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် အသံလွှင့်ရုံတစ်လျှောက် ပရိုဂရမ်ဖြန့်ဝေမှုအတွက် အရည်အသွေးမြင့် အသံဖိဒ်ကို ပေးပို့ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် လိုလားသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများနှင့် စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များတွင် အများအားဖြင့် မြင်တွေ့ရသော FM ရေဒီယိုစနစ်တစ်ခု၊ အသံထွက်များ။ off-air receiver ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ရေဒီယိုများစွာကို သီးခြားစောင့်ကြည့်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့နည်းစေပြီး ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ခြင်း၏ အရည်အသွေးနှင့် အဆက်ပြတ်မှုကို အသီးသီး တိုးမြှင့်စေသည်။
monitor စနစ် - တပ်ဆင်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ် စစ်ထုတ်မှုဖြင့် မတူညီသော စက်ပစ္စည်းများအကြား ထပ်ခါတလဲလဲ FM multiplex အချက်ပြမှုများကို ထပ်တလဲလဲ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး လွှဲပြောင်းနိုင်စေမည့် FM ရေဒီယို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် တိုင်းတာခြင်းတို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခု။ ကောင်းသော Modulation Monitor / FM Analyzer သည် အများအားဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်သော ပြင်ပ GSM Modem မှတဆင့် GSM ချိတ်ဆက်မှုကို ခွင့်ပြုပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် ချန်နယ်အခြေအနေကို အလွယ်တကူ စောင့်ကြည့်နိုင်စေရန် သို့မဟုတ် သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှတဆင့် အသံအချက်ပြမှုများကို အချိန်နှင့်နေရာမရွေး လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆာဗာထိန်သိမ်း - သိုလှောင်ရန်အသုံးပြုသည့် သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အလုံပိတ်အာကာသဖွဲ့စည်းပုံသည်6ယူနစ်ထက်ပိုသော အသံလွှင့်ကိရိယာများကို သိုလှောင်ရန် (ချန်လှပ်ထားနိုင်သော 1-8 ယူနစ်)။ ဆာဗာ ထိန်သိမ်းကို ၎င်း၏ ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုကြောင့် အထပ်ထပ် သို့မဟုတ် တိုးချဲ့နိုင်ပြီး၊ အသုံးအများဆုံး ဆာဗာ ထိန်သိမ်း အမျိုးအစားများမှာ 1U၊ 2U နှင့် 4U (8U သည် ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်း နည်းပါးသည်)၊ ကြီးမားသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် 19" case server rack သည် rack ပစ္စည်းများအတွက်စံပြအကောင်းဆုံးမော်ဒယ်။ server rack ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်အတွက် ကြမ်းပြင်နေရာအသုံးပြုမှုကို လျှော့ချပေးသည်၊ စက်ပစ္စည်းဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့ကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေကာ၊ သေးငယ်သော rack space များကြားတွင် အကန့်အသတ်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို စုစည်းထားရန်၊ ဥပမာ၊ အအေးခံလေကြောင်းစီးဆင်းမှုကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ရန်၊ များစွာသော တိုးချဲ့နိုင်သော အတွင်းနေရာကို စုစည်းပါ။ နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ပိုမိုလွယ်ကူသော အင်တာဖေ့စ်ပေါင်းစည်းထားသော စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စသည်ဖြင့် rack server သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အာမခံပါသည်- စက်ပစ္စည်းများ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ စသည်တို့၏ ဗို့အားမြင့်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများ စသည်တို့ကို ထိမိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် နည်းပညာကောင်လေးကို အန္တရာယ်ပြုခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
IP အသံကုဒ်ဒက် - အသံအချက်ပြမှုများကို (အင်နာလော့ဂ်မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်သို့ပြောင်းခြင်း)၊ အသံကုဒ်သွင်းခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် အော်ဒီယိုစက်ပစ္စည်း။ အသံအချက်ပြမှုများကို IP ကွန်ရက်များ (ဝါယာကြိုးမဲ့ ဘရော့ဘန်း) နှင့် ကြိုးမဲ့ ဘရော့ဘန်းကွန်ရက်များ (3G၊ 3.5G နှင့် 4G) တို့မှ အသံချုံ့ချဲ့မှု အယ်လဂိုရီသမ်များကို အသုံးပြုသည့် IP အော်ဒီယိုကုဒ်ဒစ်များမှ ပေးပို့ပါမည်။ IP အော်ဒီယိုကုဒ်ဒစ်များကို အကွာအဝေး ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့် အသံအချက်ပြမှုများ ထုတ်လွှင့်ခြင်းများတွင် အများဆုံးအသုံးပြုသည် ဥပမာ၊ အဝေးမှ IP အသံထုတ်လွှင့်မှုများနှင့် STL လင့်ခ်များစွာ (စတူဒီယိုသို့ အသံလွှင့်လင့်ခ်များ သို့မဟုတ် STL လင့်ခ်များ) သို့မဟုတ် ကွန်ရက်များ/ဘူတာရုံများ/ဆက်နွယ်မှု/စတူဒီယိုများအတွက် အသံဖြန့်ဝေမှု။
ထုတ်လွှင့်ဂြိုလ်တုလက်ခံကိရိယာ - ဂြိုလ်တုအသံပရိုဂရမ်လက်ခံခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည့် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ကိရိယာအပိုင်းအစနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုကွန်ရက်၊ ရေဒီယိုအချက်ပြမှု၊ ပြင်ပ FM အင်တင်နာနှင့် ရုပ်သံလွှင့်ဌာနတို့မှတစ်ဆင့် တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ အများအပြားဖြန့်ဝေသည့်အသံ။ ဂြိုလ်တုလက်ခံသည့်ကိရိယာကို HD လက်ခံကိရိယာ၊ ယေဘုယျလက်ခံသူ၊ အသံဖမ်းစက်ဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ခံသူနှင့် ကုဒ်ဝှက်ထားသော ချန်နယ်လက်ခံသူဟူ၍ အမျိုးအစားများခွဲထားကာ အသံဖြန့်ဝေခြင်းအက်ပ်ပလီကေးရှင်း၏ အဓိကကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် အများအားဖြင့် ရှုမြင်ကြသည်။ stateliite လက်ခံကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် အရည်အသွေးမြင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း၏ ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။
DAB+/DRM/HD ရေဒီယို ကုဒ်နံပါတ် - DAB+၊ DRM နှင့် HD ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်ရှိ သင့်လျော်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပရိုတိုကောတွင် AES သို့မဟုတ် analog အသံလွှင့်ခြင်းကို ထုတ်လွှင့်ရန် အသုံးပြုသည့် ဟာ့ဒ်ဝဲကုဒ်ကုဒ်ကိရိယာ။ ဟာ့ဒ်ဝဲ ကုဒ်ဒါသည် သေးငယ်ပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော သေတ္တာတစ်ခုဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ၎င်းသည် ပိုမိုတည်ငြိမ်စွာ အလုပ်လုပ်ကာ open-source software ကုဒ်ပြောင်းသည့်စနစ်ထက် ဝယ်ယူမှုစရိတ်သက်သာပါသည်။ PS- DAB+ သည် WorldDAB ဖိုရမ်မှ မူလသတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံနှင့် ဒေသအများအပြားတွင် အသုံးပြုသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း၏ ရေဒီယိုအသံလွှင့်စံနှုန်းအသစ်ဖြစ်သည်။ DAB+ သည် DAB နှင့် သဟဇာတမဖြစ်ဘဲ အလုပ်လုပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ DAB လက်ခံသူသည် DAB+ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းကို လက်ခံမရနိုင်ပါ။ ရေဒီယို spectrum အတွက် အသုံးပြုသည့် ထိရောက်မှုအရ၊ DAB သည် analog FM ထုတ်လွှင့်ခြင်းထက် ပိုကောင်းသည်၊ အကြောင်းမှာ DAB သည် တူညီသော bandwidth အတွက် ရေဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် များသောအားဖြင့် spectrum ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးပြုပြီး analog FM ထက် မိုဘိုင်းနားဆင်ခြင်းထက် ပိုမိုအားကောင်းပြီး multipath မှိန်သွားပါသည်။ FM သည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လွှမ်းခြုံဧရိယာကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း ရေဒီယိုအချက်ပြမှုများမှာလည်း အားနည်းသွားပါသည်။ အခြားကမ္ဘာ့မြေပြင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေဒီယိုစံနှုန်းများတွင် HD ရေဒီယို (မက္ကဆီကိုနှင့် အမေရိကန်)၊ ISDB တီဘီ (ဂျပန်)၊ DRM (ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေဒီယို Mondiale)၊ CDR (တရုတ်) နှင့် ဆက်စပ် DMB တို့ ပါဝင်သည်။ DMB အကြောင်း- ၎င်းသည် "ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေဒီယို Mondiale" ကို ရည်ညွှန်းပြီး Mondiale သည် "ကမ္ဘာ့" ကို အီတလီနှင့် ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် ရည်ညွှန်းပါသည်။ DRM သည် AM၊ လှိုင်းတိုနှင့် FM ကဲ့သို့သော analog ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက် လုပ်ဆောင်နေသော လှိုင်းနှုန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းနည်းပညာအစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
Audio Patch Bay - အသံကိရိယာအမျိုးမျိုး၏ အဝင်အထွက်များနှင့် အထွက်များကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ရန် အသုံးပြုသော ဝါယာကြိုးပြောင်းသည့်အချက်အချာ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေအနေနှင့် စံပြဟာ့ဒ်ဝဲစီမံခန့်ခွဲမှုကိုခွင့်ပြုသည့် (ပလပ်ထိုးခြင်းအတွက် ထပ်ခါထပ်ခါမရွေ့ရန်မလိုအပ်ပါ) အသံအချက်ပြမှုများကို လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းမှတစ်ဆင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းမှုအခြေအနေနှင့် စံပြဟာ့ဒ်ဝဲစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ခွင့်ပြုပေးသော audio patch bay ကို rack server တွင် အများစုတွင် ထားရှိပြီး၊ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ ၎င်းသည် နိမ့်သည် စက်ပစ္စည်း အစားထိုး ကုန်ကျစရိတ်- အားပြန်သွင်းခြင်း နှင့် ပလပ်ဖြုတ်ခြင်း လျော့နည်းခြင်း ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ထုတ်ကုန်၏ သက်တမ်း ပိုရှည်ခြင်း ဆိုသည်မှာ စက်ပစ္စည်း မျက်နှာပြင်များ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းများကို ရှောင်ရှားနိုင်လုနီးပါး ဖြစ်သည်။ အပြိုင် patch bay၊ ပုံမှန်တစ်ဝက် ပုံမှန် patch bay နှင့် ပုံမှန် patch bay အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိသည်၊ audio patch bay အများစုသည် audio input နှင့် output အတွက်အသုံးပြုသော interface အတန်းများပါရှိပြီး၊ အတန်းနှစ်တန်း၊ ကျောဘက်တွင်၊ အရှေ့ဘက်တွင် နှစ်တန်းရှိသည်။ audio patch bay ကို အသံပရိုဆက်ဆာ၊ audio mixer စသည်တို့ကဲ့သို့သော အခြားအသံပစ္စည်းများနှင့် တွဲသုံးနိုင်သည်။
အသံတိတ် "Dead Air" ထောက်လှမ်းကိရိယာ - အသေခံလေထုအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်သည်၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် အသံသွင်းမှုအဆင့်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး အီးမေးလ်၊ SNMP သို့မဟုတ် analog optocoupler အထွက်များမှတစ်ဆင့် အသံတိတ်သတိပေးချက်ကို ပေးပို့နိုင်သည့်ကိရိယာ။ Silence detector ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများနှင့် တီဗီဌာနများတွင် အများဆုံးတွေ့ရပြီး အခြားသော အသံလွှင့်ကိရိယာများနှင့် အလွယ်တကူ အသုံးချနိုင်သည်။ Dead Air အကြောင်း- လေသေသည် မရည်ရွယ်ဘဲ ပြတ်တောက်ခြင်း (များသောအားဖြင့် အသံမထွက်) သို့မဟုတ် အသံမထွက်သော မီဒီယာထုတ်လွှင့်မှုတွင် တိတ်ဆိတ်နေသည့်ကာလကို ရည်ညွှန်းသည် အထူးသဖြင့် ကျွမ်းကျင်သူ ရေဒီယို အသံလွှင့်ခြင်းအတွက် မျှော်လင့်ထားသမျှ အဆိုးဆုံး အရာအဖြစ် ရေဒီယို အသေကို ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဘူတာရုံပိုင်ရှင်အတွက်၊ Dead Air သည် ကဏ္ဍများစွာတွင် ဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိလာနိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ စပွန်ဆာပေးထားသော ကြော်ငြာဝင်ငွေနှင့် အွန်လိုင်းနားဆင်သူများ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ Delegation Switcher (စတူဒီယိုများနှင့် အခြားအသံအရင်းအမြစ်များကြားတွင် ပြောင်းရန်၊ ထုတ်လွှင့်မည့်အရာကို ရွေးချယ်ခြင်း)
ထုတ်လွှင့်မှု နှောင့်နှေးခြင်း။ - နှာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် တိုတောင်းသော မှတ်ချက်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော အမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ် လက်ခံနိုင်ဖွယ်အကြောင်းအရာများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ထုတ်လွှင့်သူများမှ ထုတ်လွှင့်သည့်အချက်ပြမှုများကို နှောင့်နှေးစေသည့်နည်းဖြင့် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာတစ်ခု၊ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူထံမှ လိုအပ်သော ထုတ်လွှင့်မှုနှောင့်နှေးမှုကို ညစ်ညမ်းနှောင့်နှေးခြင်းဟုလည်း ခေါ်သည်၊ ၎င်းသည် အချိန်လုံလောက်စွာပေးသည်။ (တစ်မိနစ်ခွဲမှ နာရီအနည်းငယ်အထိ) ထုတ်လွှင့်သူများအတွက် အသံ (နှင့် ဗီဒီယို) ညစ်ညမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အရည်အချင်းမပြည့်မီသော အကြောင်းအရာများကို ဆင်ဆာဖြတ်ပြီး အပျက်သဘောဆောင်သည့် လွှမ်းမိုးမှုများရှိလာပါက ၎င်းတို့ကို ချက်ချင်းဖယ်ရှားပါ။ ထုတ်လွှင့်မှုနှောင့်နှေးခြင်းကို တိုက်ရိုက်အားကစား စသည်တို့ကဲ့သို့ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်းနှင့် တီဗီထုတ်လွှင့်ခြင်းများတွင် အများအားဖြင့် တွေ့ရပါသည်။
ရေဒီယိုစခန်းများအတွက် အသုံးများသော ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမှာ-
လေအေးပေးစက်များ (စတူဒီယိုခန်းနှင့် အင်ဂျင်နီယာအခန်းအတွက်) - ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် အေးမြသောလေကို ပေးဆောင်ရန်နှင့် သင့်ဧည့်သည်များအတွက် အကောင်းဆုံးရေဒီယိုအတွေ့အကြုံကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်
ယူပီအက်စ် - Uninterruptible power supply (UPS) သည် မတော်တဆ ပါဝါပြတ်တောက်မှုဖြစ်သောအခါ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနရှိ ဟာ့ဒ်ဝဲလ်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်အရန်အရန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ရောက်ရှိရန် UPS သည် လုံလောက်သော အရေးပေါ်စွမ်းအင်ကို ပေးဆောင်ပြီး ရုံးခန်းကဲ့သို့သေးငယ်သော နေရာအတွက်သာမက ကြီးမားသော ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်အတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်သည်။ UPS တစ်ခုအတွက် အသုံးများသော ကြာရှည်ခံချိန်သည် မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာ ရှိလိမ့်မည် (အထွက်ပါဝါပေါ်မူတည်၍)၊ သို့သော် ၎င်းသည် ဂျင်နရေတာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် လုံလောက်ပါသည်။
မီးစက် - စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်မှ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနသို့ ပံ့ပိုးပေးသည့် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ
အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ - မတူညီသောအပလီကေးရှင်းများအတွက် နေရာလွတ်များပေးဆောင်ရန်၊ ဥပမာ- မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် အသံလုပ်ငန်းစဉ်ကဲ့သို့သော စတူဒီယိုအသံလွှင့်ကိရိယာများထားရှိရန် စားပွဲခုံနေရာ၊ ရေဒီယိုဧည့်သည်များအတွက် နားနေခန်းစသည်ဖြင့်၊
လေပေါ်ကိရိယာ - လေပေါ်မီးနှင့် လေပေါ်နာရီတို့ ပါဝင်သည်။ ကျွမ်းကျင်သော ရေဒီယိုစတူဒီယိုတစ်ခုတွင်၊ လေဝင်လေထွက်မီးအိမ်သည် နံရံပေါ်တွင် တပ်ဆင်နိုင်သည့် မီးသတိပေးကိရိယာဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် သင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေသည့်နေရာများသို့ မရည်ရွယ်ဘဲ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်မည့်သူများကို အာရုံစိုက်စေရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုသည် (သင့်အစီအစဉ်များကို မတော်တဆ ပျက်စီးစေပါသည်။ ) ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် သင်၏ ဘူတာရုံ မည်ကဲ့သို့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖြစ်သည်ကို ပြသရန်နှင့် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု အခင်းအကျင်းတွင် လူတိုင်း တိတ်ဆိတ်နေရန် သတိပေးရန် အရေးကြီးသော ကိရိယာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိနာရီသည် အချိန်နှင့်ရက်စွဲပြသမှု၊ ရေတွက်မှုအချိန်တိုင်းကိရိယာ၊ ကြော်ငြာပြတ်တောက်မှုစသည်ဖြင့် ကိရိယာ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို သတိပေးသည့် အချက်အလက်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Studio Acoustic Wedges Foam - polyurethane/polyether/polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် မြှုပ်ကွက်ကို cuboid ၏ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ဖြတ်တောက်ထားပြီး၊ အများအားဖြင့် ရေဒီယိုစတူဒီယိုတွင် အသံလုံစေရန်အတွက် အသုံးပြုပြီး ဆူညံသံများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ကျယ်ဝန်းမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ရေဒီယိုစတူဒီယိုတွင် အသံလုံအောင်ပြုလုပ်ထားသည်။